''ငါဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းတဲ့ ED မှမကုသသေးတာလဲ။ ' ကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုရန်အခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့အတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းသည်ရှည်လျားပြီးနှေးကွေးသည်။ ထို့ကြောင့်ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည်အလွန်ရှည်လျားစွာရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားများပြောခဲ့သကဲ့သို့အကြံပေးချက်များစွာနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအချက်အလက်များကိုထုပ်ပိုးထားသည်။
လုလင်တို့သည်အတွက် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ လုံးဝနီးပါး 40 အောက်မှာယောက်ျား ဘယ်တော့မှ streaming များညစ်ညမ်းရောက်ရှိလာခဲ့သည်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြင် သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာခြင်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၃၀ နှစ်အောက်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစောစောစီးစီးစတင်လျှင်၊ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦး နှောက်အကြားခြားနားချက်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပညာပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ခြားနားချက်သည်အတွေ့အကြုံများစွာမဟုတ်ပါ၊ ခြားနားချက်များကိုလေ့လာခြင်းသည်သင်နှင့် (သင်၏မျိုးဆက်ရှိသူများ) သည်လိင်မှုကိစ္စကို“ သတ်မှတ်ခြင်း” ပြုခဲ့ကြသောအချို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများထက်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အဘယ်ကြောင့်သင် (နှင့်သင်၏မျိုးဆက်ရှိသူများ) ကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ရှေ့မှာ သူတို့ streaming များညစ်ညမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်ပါအရင်းအမြစ်များကိုကူညီပေးပါမည်:
porn-သွေးဆောင် ED Reboot အကြံဉာဏ် ဗီလော့ဂ်: ဂါယူဆပါသည် - လိင်ဆက်ဆံရန် ၉ လ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ကိုယ်တည်းစိုက်နိုင်ဖို့ ၁၅ လ။
Motivation လိုအပ်ပါသလား? ငါ့ကိုအထဲကနားထောင်ကြလော့ က Short နှင့်ချို - Gabe ၏ reboot ချည်သည်သူရှည်သော reboot နှင့် ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ - ပြဇာတ်ဆလိုက်ရှိုး
စိတ်ပညာယနေ့ post - Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ် - erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပိုကြာသောလူငယ်များသည်ပေါ်ထွက်လာနေသောလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းတွင်လူငယ်များ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ကိုက်ညီသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာနှင့်တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်။
ဤဆောင်ပါး - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် rewiring နှင့်စွဲဖို့ထူးခြားသည့်အားနည်းချက်သည်အဘယ်ကြောင့်, ရှင်းပြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကျွမ်းကျင်သူဂျေး Giedd- နေဖြင့်တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းဟောပြောပွဲ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute မှဒေါက်တာဂျေး Giedd
ဂယ်ရီ၏ရေဒီယိုကဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အားနည်းချက်များနှင့်ပျော့ပြောင်းနိုင်မှုကိုပြသသည်
တိုးတက်မှုကိုရှည်လျားပြန်လည်စတင်နေစဉ်အတွင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် - အတက်အကျများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်များ
အချို့သောရှည်လျားသော rebooters များ၏အကောင့်များကိုပြန်ဖွင့်ပါ။
အသက် ၁၇ - (ED) သည်နိုးကြား။ အနားယူ၊
တစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်ကနေအကောင့်
အသက် ၁၈ - ၆ လအစီရင်ခံစာ - ED၊
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိအကောင့် - ED ပျောက်ကင်းသွားသည် - ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာသည်
အသက် ၁၈ ရက် - (ရက်ပေါင်း ၁၃၀) သည်စုပ်စက်ကိုချုပ်ရန် ၁၂၃ ရက်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်
Delight Age 21 - Porn-ED ဆေးသောက်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်ငပဲသေဆုံးသွားသောကြောင့်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်
အသက် ၂၁ - အပျိုစင်ဘဝမှ PIED ပြီးပြည့်စုံသောလိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံမှုသို့ (၂ နှစ်နီးပါး)
အသက် (၂၁) နှစ် - ED၊ PMO မရှစ်လကြာခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ အဘယ်သူမျှမ porn = အဘယ်သူမျှမ libido ။
(၂၃) နှစ်အရွယ် (ED) ၇ လသည်စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးလိုအပ်ခဲ့သည်
အသက် ၂၂ မှ ၃၀၀ ရက် - ED, DE၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ယုံကြည်မှု
အသက် ၂၂ နှစ် - ED ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါလိင်စိတ်နဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုနဲ့ငါ့လိင်စိတ်ကိုနိုးထခဲ့ရတယ်
အကောင့်အသက် ၂၄ - ED ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါထင်ရင်တောင်ပျောက်သွားတယ် (၂၀ လ) ဒီလူက "စူးစိုက်ကြည့်ခြင်း" ကသူ့ကိုနှေးကွေးစေတဲ့အကြောင်းသိသွားတယ်။
အသက် ၂၄ - အေဒီ။ ယခုငါ့စိုက်ထူမှုသည်သူတို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၂ နှစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသော ED သည် Gone ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်လူသား - ED သည်ကုသမှုခံယူသော်လည်းလိင်မှုကိစ္စသည် (၇) ပတ်ကြာစတင်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အနာပျောက်
အသက် ၂၄ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ ၅ Viagras သည်အသွင်ပြောင်းရာတွင်ကူညီခဲ့သည်
Rebooter အသက် (၂၅) နှစ် - (၁၈ လ) No Porn ဆေးသောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ED ဟာရောဂါပျောက်သွားပါတယ်
အကောင့်အသက် ၂၅ - ED၊ ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်နာလန်ထူခြင်း၊ hypno နှင့် kegels အထောက်အကူပြုသည်
အပျိုစင်အသက် ၂၆ နှစ် - တကယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်
Guy Age 29 - (ED): နေ့ ၂၃၆၊ အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - အဆိုးရွားဆုံးသောэрထည်မကျေနပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အခြေအနေတစ်သက်တာမှ vanilla sex life ကိုခံစားနိုင်သည်။ ၂ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်
Man Age - အသက် ၃၃ နှစ် - စစ်မှန်သောလိင်ကိုမခံစားထိုက်ပါ
ပြင်းထန်သောပုံ - ၃၀ နှင့်အပျိုများမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားရန် ၃ နှစ်ခန့်ကြာခဲ့သည်
porn ကိုအစဉ်အမြဲငါ့ကိုအတိုင်ခဲ့သလား (အလှပြင်ဆိုင်)
တစ်နှစ်ကိုရက် ၉၀ ထိရောက်ရန် - libido & ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
၁၃၂ ရက် - အောင်မြင်သောလိင် (ED)
၉ လ - (ED) ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ မှေးမှိန်မှုတွေပျောက်သွားတယ်၊ အဆင့်တိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ငါဆက်သွယ်ခဲ့တယ်
နေ့ 124 ကျွန်မရဲ့တိုးတက်ရေးပါတီယခုအချိန်အထိ
NoFap ၏ 3+ နှစ်ကြာပြီးနောက်။ ED & Delayed သုက်လွှတ်ခြင်းမှအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူရန်နီးကပ်
ED ပြန်လည်နာလန်ထူကန်ရှည်လျား reboot ပြီးနောက် meth နဲ့စတင်
ရက်ပေါင်း ၁၇၀ - ED သည်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်မဟုတ်သော်လည်းယုံကြည်မှုမြင့်တက်ခဲ့သည်
ငါကို restart အချိန်တစ်တန်သုံးစွဲ (သူ၏တစ်ခုလုံးကိုဘလော့ဂ်ဖတ်ရှုဖို့လိုပေမည်)
တဖန်ငါဂီတကိုခံစားနိုင်သည်၊ သူစိမ်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁.၅ နှစ်ဖြစ်သည်။
သငျသညျဖို့လိုပေမည် ဒီမှာအခြားရဲ့ stats ကိုဖတ်ပါ.
၂၁ နှစ်ရာနှုန်းပြည့် Broadband မောင်းနှင်သည့် ED ရောဂါအသစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရစဉ်။ ကျွန်မမှာအစစ်နှင့်အသွေးအမြိုးသမီးမြားနဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးဖို့အခွင့်အလမ်းသုံးခုရှိတယ်။ တစ်ခါတလေကျရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ (ဥပမာ - ဒီအမျိုးသမီးတွေကအိပ်ရာထဲမှာရှိနေပြီးသွားဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ အဝတ်တွေလည်းချွတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ) အခြားအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်၊ တခြားမိန်းကလေးတွေတောင်ကျွန်တော့်အိပ်ရာမှာအိပ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်ကြားမှာတောင်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး။ ငါအသေးစိတ်ကိုမသွားပေမယ့်အချိန်တိုင်းမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှက်ခြင်း၊ ငါကအနည်းဆုံးလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါဟာလိင်ကွဲလိင်ကွဲသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။
ငါသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းခံစားခဲ့ရသောအရာကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်နိုင်လျှင် 'ဂြိုလ်သား' ဟူသောစကားလုံးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုမည်။ ဒါဟာငါအတုနှင့်နိုင်ငံခြားခံစားရတယ်။ ငါဟာဒီမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးသေခြင်းတရားနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားအောင်လုပ်ထားတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့စိတ်ကဒါကိုအမှန်တကယ်လိင်မဟုတ်ဘဲသာမန်လိင်လို့ထင်တယ်။ ငါ porn အတွက်ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်, ပြproblemနာမရှိ, ဒါပေမယ့်ငါ့ကို၏ဘဝအဘို့ငါစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဘို့အခက်ခဲရနိုငျသညျ။
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: အသက် (၂၇) နှစ် - ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းအလွန်ပြင်းထန်သောရောဂါကုသခြင်း
ဒုတိယအကောင်လေး: အသက် ၂၆ - Reboot က ၃ နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ ED၊ စိုးရိမ်စရာ၊ ချွေးထွက်တာ၊
တတိယကောင်လေး: ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့နှစ်၊ ၃၊ ၄ နဲ့ ၄ နှစ်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဇာတ်လမ်းတွေကစတင်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျူးလွန်ခံရတဲ့လူငယ် rebooters တွေကအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေကိုစရေးနေပြီ။ အချို့လူများကယုံကြည်ရန်နှင့်လက်ခံရန်ခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ယခုထက် ပို၍ ကြာကြာလာသည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်မဆိုလိုပါဘူး လူတိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရန် (၂) နှစ်လောက်ကြာတော့မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အသက် ၂၀ အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအမြန်နှုန်းမြင့် porn ဖြင့်ဘဝငယ်ရွယ်စဉ်ကစတင်ခဲ့ပါကသင်သည် ၁+ နှစ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသည်။ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပါအ ၀ င်) များစွာသောလူတွေကဖိုရမ်တွေထဲကိုတစ်နှစ်ကျော်လာပြီးပြန်လည်နာလန်ထူလာနေတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျစရာဘာမှမရှိဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ ED သည်အပြည့်အဝမကုသနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကထက်ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဘဝရှိသည်။ အလေးအနက်ထား, ငါတတျနိုငျသ မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအချိန်မရွေးရယူပါ။ ယခုငါအပတ်စဉ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဓိကအချက်ကငါဟာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲကြာရှည်ပါစေကတိက ၀ တ်ပြုမှုအားလုံးဟာထိုက်တန်ပါတယ်။
စတုတ္ထကောင်လေး: ငါ (အငြင်းပွားစရာမရှိပေမယ့်) အနည်းငယ်ပြန်လည်ထူထောင်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်ငါ့ reboot တစ်နှစ်လုံးကြာခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးမီကမှသာငါ ED နှင့်အတူတိုးတက်မှုမြင်နေ, နှင့်порноဆန့်ကျင်အဖြစ်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအတွက်အလိုဆန္ဒရှိရှိသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ porn သည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိမှသာ reboot ကိုစတင်သည်။ ငါ "လူ၊ PMO ဟာနံနက်တိုင်းအိပ်ရာထဲကထွက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်း" ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆိုတာမလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်ဟာသဖြစ်သော်လည်းလူတို့နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုသင်ပြန်လည်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ငါလေ့လာသင်ယူစဉ်ကငါဟာလူသားမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုဟာလူသားတွေဖြစ်တယ်။ ငါအတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူစက်ရုပ်များကဲ့သို့ခံစားရတယ်။
ငါမျှော်လင့်ချက်အရှုံးမပေးဖို့နီးပါး။ ငါပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါလိုလူတွေများတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ၊ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကစပြီး ၁၈ နှစ်မတိုင်ခင်ပထမဆုံးနမ်းတာတောင်မတွေ့ရဘူး၊ နောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေး ၁၅ ယောက်လောက်တော့ဘာတုန့်ပြန်မှုမှမရှိပါဘူး။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်တဲ့အဆိုးဆုံး ED ရောဂါပျောက်သွားသည်အထိကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးအမှားမှားမိသည်အထိမသိခဲ့ပါ။ ကြာသည်:
9.5 လအတွင်းလုံးဝ Porn
ပြီးခဲ့သည့် 5.5 လအတွင်းအဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် orgasm ခဲ့ကြသည်
rewire မှလိင်ကိုထပ် (ပထမမှာအရည်အသွေးနိမ့်) ရှိခြင်းဤနောက်ဆုံး4ရက်သတ္တပတ်
rewiring တစ်ခုစီ၏နေ့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးယနေ့တွင် - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုစဉ်းစားယခုငါ့ကိုလှည့်။ မျှော်လင့်ချက်မပျက်ပါနှင့် တစ်နှစ်အထိပင်အချိန်ယူရသော်လည်း၊ သင်သည် porn နှင့်ခဏတဖြုတ်စွန့်လွှတ်လိုက်လျှင် rewire လုပ်ပါကသင်။ လိမ့်မည်။ ကုသ။ ပြီးတော့သင်သိရင်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာကံကောင်းပါစေ out
ငါ "internal_idiot" နှင့်အတူသဘောတူသည်။ သင်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ သင်စိတ်ရှည်ဖို့လိုပြီးသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားရမယ်။ ဂယ်ရီ Wilson ကဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခဲ့သည် သူကအငယ်ဆုံးယောက်ျားအချို့သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ၉ လအထိလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင် ၇ လလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်“ rebooting” လုပ်ဖို့အချိန်တော်တော်များများလိုလိမ့်မယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀၇ ကကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်လုံးဝ ED ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုက်ကွန်တွင်အကောင်းဆုံးဘွတ်ဖိနပ်များကိုရှာဖွေရန်နေ့စဉ် ၃ နာရီအသုံးပြုနိုင်သည်။
ယောက်ျားတွေရဲ့ပထမဆုံး porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူတက်ပြသတဲ့အခါသူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, porn စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အော်ဂဇင်တဲ့နိမ့်ဆုံးခန့်နှစ်လအတွင်းပြန်လည်ကောင်းမွန် (ကြည့်ရှုပါ: ဘယ်လောက်ကြာက Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှထမြောက်ဖို့ယူကြမည်နည်း ) ။ အများစုကသူတို့ uncharacteristic စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများရှိခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းသတိပြုမိသည့်အခါလာမည့်ကွေး၏ highspeed ကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးစတင်များနှင့်ရောက်ရှိလာကြသောကွန်ပျူတာ wizards ခဲ့ကြသည်။
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါအများစုသည်အင်တာနက်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုခဲ့ကြပါ။ သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာကတ်တလောက်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဗွီဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်သံလိုင်းဒါမှမဟုတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် (ဒီနေ့လူငယ်တွေအတွက်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အများစုမှာရှိကြသည် အချို့သော တကယ့်ဖက်နှင့်အတူလိင်သူတို့ highspeed အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရယူနိုငျခဲ့ကွတမီ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေနဲ့အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ (သို့) အချို့သောအမှုများမှအင်တာနက်အမြန်နှုန်းသို့အမြန်ဆုံးတက်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးသောကြောင့်သူတို့၏သမိုင်းကအရေးကြီးသည် ရှေ့မှာ အပျိုဖော်ဝင်စ) ။ အဆိုပါ latecomers-to-highspeed, များသောအားဖြင့်အသက်ကြီးနေသော:
ပျှမ်းမျှအားဖြင့်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက စ၍ မစတင်ခဲ့ပါ၊
ယနေ့အစဉ်အမြဲရှိနေသောအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအလွန်အမင်းမခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း၊
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတူညီတဲ့အတိုင်းအတာအထိဖိအားမပေးတဲ့အတွက်သေခြင်းတရားနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဝေးကွာခြင်းမရှိသေးပါ။
ငါ့မှာနမူနာအကန့်အသတ်ရှိတယ် (N = 2), ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းအသုံးများတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးပြီ။ ကျွန်တော့်ရည်းစားဟောင်းသည်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ သူသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပြီးအသက် ၂၈ နှစ်တွင် Viagra ကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည် porn ကိုကြည့်နေစဉ်စိုက်ထူမှုကိုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့်သူ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၎င်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်နှိုးဆွပေးခဲ့သည်။
ငါ့လက်ရှိရည်းစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သူ၏အသက် ၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်သူသည်သူ၏စိုက်ထူမှုအရည်အသွေးနှင့်ပြnoနာမရှိပါ၊ သူကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်သူသည်အထူးသ porn ကိုစောင့်ကြည့်မထားဘူး။ အဆိုပါခြားနားချက်အလွန်သိသာသည်။ နှင့်တန်ဖိုးထား။
, အပျိုဖော်ဝင်စကနေအလွယ်တကူအင်တာနက်က porn မှနိုင်ပါတယ် masturbate တဲ့သူလူငယ်တို့ယောက်ျားတွေ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် overstimulate, အရာ, အလှည့်အတွက်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန် dampens ။ သူတို့တစ်တွေတင်းကျပ်နှင့်တင်းကျပ်တဲ့ချုပ်ကိုင်ထားလိုခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်မှအသစ်အဆန်းတိုးပွားလာ။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတကယ့်ဖက်နှင့်အတူအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ်ပါးစပ်လိင်အနည်းငယ်သာဆက်ဆံရေးမျိုးဖြင့်သမုတ်သော။
pubescent / ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ကလိင်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုခိုင်မာတဲ့ ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများသို့ချိတ်ဆက်ရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှဒီနေ့ခေတ်ယောက်ျားတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စကိုမသိမသာကျဉ်းမြောင်းစွာဖြတ်သန်းနေရပြီးအတားအဆီးဖြစ်စေပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၊ သူတို့လူကြီးဘ ၀ သို့ရောက်သောအခါသူတို့၏ ဦး နှောက်ဖြစ်သည် အသုံးမပြုတဲ့ circuitry ကျောသုတ်သင်။ ဒါကြောင့်တရားရုံးနှင့်မိတ်လိုက်ဘို့အဦးနှောက်ဆားကစ်, ထိုဖြစ်ပါသည်, ကျွမ်းကျင်မှုမြီးကောင်ပေါက်များအတွက်ဆားကစ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်အားဖြင့်, လူမှုရေးနှင့် tamer တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထမှတဆင့်ခိုင်ခံ့စေ၏အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသွားပြီ။
ပိုဆိုးသေး, ဤယောက်ျားတွေသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းသံသယဘူး။ အဘယ်ကြောင့်?
သူတို့ဟာမကြာခဏအဖော်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်မကြိုးစားမီနှစ်ပေါင်းများစွာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပါ။ ထိုသူတို့ကသူတို့ကို desensitization ကိုပြသလိမ့်မည်ဟုသောညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbating ကြိုးစားရန်စဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
Porn ၏အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းသည်အစွမ်းထက်သော်လည်းသဘာဝမဟုတ်သော aphrodisiac ဖြစ်သည် အမြဲ သူတို့အလုံအလောက်စောင့်ကြည့်လျှင် porn မှချွတ်ရ, ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်း။ တချို့ကအမှတ်တမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာအားလုံးအပေါ်ဒီလိုအစစ်အမှန်လိင်အဖြစ်ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုမှလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုများမှာသော်လည်း၎င်းတို့၏ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစင်တာကိုနှိုးဆွ၏ထူးခြားနိုင်စွမ်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆပ်ကြောင်းစွဲ-related အပြောင်းအလဲများကိုခံယူ။
အခွင့်အလမ်းများက အကယ်၍ သင်ဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှာကြီးပြင်းလာပြီး၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့လူငယ်လေးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ခင်ဗျားကအသစ်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကပိုကြာနိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပိုများလာနိုင်သည်။ ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိသင့်တဲ့ rebooting account တစ်ခုပါ။ အသက် ၁၈ - လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၌အာရုံခံစားမှုမရှိပါ။ (နောက်ထပ်နမူနာကို restart အကောင့်အသစ်များ၏ ဒီမှာ, ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ။ ) တောင်မှသင်ကပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံဖို့လုံလောက်တဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေကြသည်ပြီးနောက်, သငျသညျလကြာဆက်လက်တိုးတက်မှုများတွေ့မြင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူများသောအားဖြင့်လုပ်နေတာနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပါဝငျ:
အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် porn အစားထိုး။
ဒါဟာပြုပြင် ဦး နှောက်ရဲ့ sensitivity ကို ဒါကြောင့်သင် (အစားသာစဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းများနှင့်တစ်ဦးအသေခံ-ချုပ်ကိုင်ထား၏အစွန်းရောက်ဆွဖို့ထက်) သာမန်အပျြောအပါးတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ အများစုကယောက်ျားတွေလစုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းဒီတော့ထွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်, အာရုံစူးစိုက်မှု, ယုံကြည်မှု, အမှန်တကယ်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်မှဆွဲဆောင်မှုနဲ့သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်သတင်းပို့ပါ။
အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ရန်သင့်လိင်စိတ်နိုးထ Rewire: နမ်းခြင်း၊ ထိခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ စဉ်းစားခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုချိန်းတွေ့ခြင်း။ အကယ်၍ သင်၏စိုက်ထူမှုများသည်နှေးကွေး။ သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအားကိုးအားထားပြုနေလျှင်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှင့်အစစ်အမှန်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့် (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိလျှင်) အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
အကြံပြုချက် ၁ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွပ်စွဲခံရမှုများကိုစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ထိပ်ဖျား: အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပါနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပြုသကဲ့သို့, ကို restart သို့မဟုတ် rewiring စဉ်အတွင်းမည်သည့်အချက်မှာအလွန်အကျိုးရှိပါတယ် မဟုတ် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆင်သင့်မီလိင်ဖျော်ဖြေဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေး။ ကခုန်, ဒါကြောင့်ထွက်ခန့်ထားပါသည်, နမ်းနှိပ်ဖလှယ်နှင့်, ရှိသမျှကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်ရန်သင့်ဦးနှောက် rewiring အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ Cuddle သူငယ်ချင်းများ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သုသေသနပြုမှုအရအောက်စီတီတိုသည် (ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုနှင့်အနီးကပ်၊ ယုံကြည်ရသောအဖော်ဖြစ်ခြင်းမှထုတ်လွှတ်လိုက်သော) သည်စိုက်ထူမှုများအတွက်အရေးကြီးသည်ကိုသတိပြုပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးချိတ်ဆက်မှုများမလုပ်ထားပါကဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကြိုးစားပါ။ ကြည့်ပါ ယောက်ျားတွေ: သင်သည်မယား Spectrum အပေါ် Fall ပါနဲ့ဘယ်မှာရှိသနည်း အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုနားလည်ဘို့ သင့်ရဲ့ ဒါဟာအမှန်တကယ်မိတ်ဖက်မှကြွလာသောအခါဦးနှောက် (ကပုံမှန်ချိတ်တက်သည်ထက်) ပိုပြီးချိတ်ဆက်မှုကိုရှာကြံနိုင်ပါသည်။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးထပ်မံလိင်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ကြိုးစားသည့်အခါမိမိကိုယ်ကို“ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည်” အခြေအနေသို့ရောက်ရန်အလွန်မကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သင့်အဖော်အားဤအရာကိုပေးပါ Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ
ဒီဟာကိုခင်ဗျားရဲ့ရေရှည်အမြင်ကိုကြည့်ရမယ်။ ပြီးတော့သင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုလုပ်ပါ။ သေရမယ့်အခြေအနေတွေအတွက်သွားမလုပ်ပါနဲ့။ သင်သည်စိတ်ရှည်ပြီးခဏတာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရပေမည်။ သူတို့ကထွက်ရှိပါတယ်။
Rewiring ငါ၏အ reboot တက်စခေဲ့!
ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိသေးပါ - ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်မလုံလောက်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုမရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သောကြောင့် တကယ်တကယ်တကယ် , နမ်း cuddling နှင့် orgasm မပါဘဲရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းလိခ်အားဖြင့်သင့် reboot အရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။
အသက် ၂၀ - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - သင့်ရှေ့မှောက်၌ရှိသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စဉ်းစားတွေးတောရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ညမှာကျွန်မဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ငါပါတီပွဲတစ်ခုမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အခန်းထဲမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကနမ်းနေတုန်းပဲ။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာအဝတ်အချည်းစည်းတွေဖြစ်လာပြီးဘာကိုခန့်မှန်းရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ သူမကလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်မရှိတာကြောင့်ငါ bj ကိုယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ပြtheနာကဘာလဲ၊ ငါလိုချင်ရင်ငါဘယ်လိုလိင်ဆက်ဆံနိုင်မလဲဆိုတာကိုငါသိတယ်။ သင်၏ရှေ့မှောက်၌ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စဉ်းစားရန်နှင့်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကသိသာထင်ရှားနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်လုံးရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာ porn ကိုသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးဘယ်တော့မှအာရုံမစိုက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ဒါကငါ့အတွက်သတင်းပဲ။
မင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နေတဲ့အခါဘာမှမစဉ်းစားသင့်ဘူးလို့ငါအမြဲတွေးခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူမနဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘာဝပဲ။ ငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး ဤအရာအလုံးစုံပျက်ကွက်ကြိုးစားမှုငါ့ ဦး ခေါင်း၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ငါဘာမျှမဆိုလို။ သင်ဘာမျှမစဉ်းစားမိပါကသင်မည်သို့နှိုးဆွခံရမည်နည်း။ မင်းရှေ့မှာမိန်းကလေးနဲ့လိင်အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်သူမှဒီအချက်ကိုပြောနေပုံမရပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တယ်။
ငါ့အကြံဥာဏ် - မင်းကို ED ရှက်နေရင်တောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှာပြီး rewire လုပ်ပါ
ထပ်ခါထပ်ခါ, ငါသည်ကြာမြင့်စွာ, အချိန်ကြာမြင့်စွာ rebooting ခဲ့ကြသောယောက်ျားတွေရဲ့ရေးသားချက်များကိုမြင်ရ, သူတို့ထိုကာလအတှငျးမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူမပြဘူး။ သာမန်စိတ်သဘောထားတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်လိင်ဆက်ဆံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခြင်း၊ မိန်းကလေးများနှင့်မပျော်မချင်းအတူနေခြင်းကိုသူတို့မခံစားရပါ။ ဒါကလိင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်မှုလွဲခြင်းပါပဲ။ ယောနိထဲမှာလိင်တံထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ပါးစပ်၊ လက်၊ လျှာ၊ လက်၊ စကားလုံးနှင့်ဆူညံသံများပါသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသင်နှစ်သက်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် reboot လုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ငါတစ်နှစ်ကြိုးစားနေ, ငါမိန်းကလေးသုံးယောက်နှင့်အတူငါဖြစ်သည့်အခါ, ငါ့လက်ရှိ Streak စဉ်အတွင်းကဲ့သို့ဤမျှလောက်တိုးတက်မှုလုပ်ဘယ်တော့မှမ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်စူပါထောက်ခံခဲ့ကြရတယ်။ သူတို့ကိုငါ PIED အကြောင်းပြောပြတယ် သူတို့ဂရုမစိုက်ဘူး သူတို့ကကျွန်မနဲ့အတူတူအိပ်ရတာကြိုက်တယ် နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်နဲ့အတူငါနောက်ဆုံးမှာအော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ကြည့်နေသောမိန်းကလေးနှင့်စကားပြောမိသည်။
ထိုအခါငါအကြီးခံစားရတယ်။ နံနက်စောစောထင်းထိန်လျက်ကျွန်ုပ်၏ libido ပြင်းထန်သည်။ ဒီဟာကိုဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ယူဆရင်၊ အော်ဂဇင်မတိုင်ခင်လုပ်ခဲ့တဲ့ rewiring ရက်သတ္တပတ်တွေကိုငါဂုဏ်တင်တယ်။ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်စကားစပြောခြင်းတို့သည်စောလွန်းပါသေးသည်။ အထူးသဖြင့်အပျိုကညာများအတွက်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိခြင်းသည်သင်၏ PMO စွဲလမ်းမှုကိုမပျောက်သွားစေနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရတာဟာမင်းလုပ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? သငျသညျဖြစ်ကောင်းပထမ ဦး ဆုံးမှာဤမှာစို့လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုဘာလို့ခက်တယ်လို့ထင်ရတာလဲလို့တွေးမိလိမ့်မယ်။ သို့သော်ယခုစတင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောလေ့လာမှုကို ၁ လမှ ၃ လအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်အဆင်သင့်အချိန်အားဖြင့်, သင်အမျိုးသမီးတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၂ နှစ်အထိအပျိုစင်ဖြစ်ပြီး PIED ရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအမျိုးသမီးများနှင့်အမှန်တကယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အခုအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ။ ပြီးတော့, ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်, ငါ "အမျိုးသမီးများနှင့်အတူမကောင်းတဲ့" ဖြစ်ခြင်းမှတော်တော်လေးကောင်းသောအကျင့်များနှင့်ငါကြိုက်တယ်နှင့်လှပနေသောအမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသို့သွား၏။ မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် သင်ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ခဲ့လျှင် seduction ပစ္စည်းများအနည်းငယ်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ သတိရပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအပိုင်းများကိုသာယူရမည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့မှာမိန်းမမျိုးစုံနဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီအကြံပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှုပါ။ အစားထိုးဖြည့်တင်းခြင်းအကြံပေးချက်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု, ဒါမှမဟုတ်စတိုင်အာရုံစိုက်ပါ။ Mark Manson (သူ့စာအုပ်မော်ဒယ်များ) နှင့် Nick Notas တို့ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကင်းမဲ့သောအကြံဥာဏ်ကောင်းရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်
သငျသညျအဆင်သင့်သည်အထိမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအော်ဂဇင်မထားပါနဲ့။ ငါအော်ဂဇင်ကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတူသောငါခံစားခဲ့ရသည့်အချက်တယ်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများနှင့်နှစ်လကြာအိပ်စက်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်ုပ်အဆင်သင့်ရှိသောနေရာသို့ရောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
rewired မလုပ်ရသေးသောရှည်လျားသော rebooters များသည်သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်လိုအပ်သည်
တစ်ဖက်ကိုရှာပါ။ သင်စဉ်းစားခြင်းထက်ပိုပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်သူ၏ ထိုအချိန်မှစ. အောင်မြင်သောလိင်ကအနည်းဆုံး7ကြိမ်ရှိခဲ့ [10 months ago] ကတည်းက reboot အမျှကျွန်မယခုထိဒီအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုနေသော်လည်းဤအကြောင်းကြောင့်ပြောပါ:
-Barely အစဉ်အဆက်နံနက်သစ်သား get
ကခက်ခဲ Self-လှုံ့ဆော်နှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်တခုတခုအပေါ်မှာစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ -Find
အကယ်၍ ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါကကျွန်ုပ်သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးရှိနေဆဲနှင့်အတူလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသည်ဟုခံစားမိလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါပြန်လည်ဆက်သွယ်နေစဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနေစဉ်၎င်းတို့အားလုံးသည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောနေတာမဟုတ်, အရက်မူး (သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံး) မှမဟုတ်လျှင်, ငါတစ်နေ့တာအတွင်းလိင်စိတ်အများကြီးရှိသည်မဟုတ်တကယ်ကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်“ ပုံမှန်” ဟုတ်မဟုတ်မပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အားလုံးသည် ၁၅ နှစ်ကြာညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပုံသွင်းသောလိင်စိတ်မှုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ PMO ကိုရှောင်ရှားရန်လွယ်ကူစေသည်။ ငါတစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမလုပ်ဘဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အထိအရမ်းကိုချိုလွန်းတဲ့အချိန်တွေဟာလွဲချော်သွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကကျန်းကျန်းမာမာလိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး။ PIED ဝေဒနာသည်များစွာသည်သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုအလွန်အမင်းစိတ်ပူနေပုံရသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းနေစဉ်အတွင်းသူတို့၏လိင်စိတ်ခံစားမှုက“ ပုံမှန်” လိင်စိတ်ကိုပုံမှန်သတ်မှတ်ထားပုံရသည်။
ငါ့အတွက်ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုံးနိမ့်ခြင်းပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤမျှလောက်စိတ်မပူဘဲရပ်တန့်ပြီး PMO နှင့်ဝေးဝေးနေပါကကိုယ်ခန္ဓာသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ဤသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနာတာရှည် ED နှင့်လိင်စိတ်ပြwithနာရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါရှည်လျားသောကာလများအတွက်အမှန်တကယ်သေပြီ libido ခံစားခဲ့ရင်ကြောက်စရာအရာနှင့်ငါမှတဆင့်သွားရသူမည်သူမဆိုအတူငါကိုယ်ချင်းစာပေမယ့်ငါကဒီမှာယောက်ျားတွေအများကြီးလျော့နည်းဆိုးရွားခြင်းနှင့်မျှသာတစ်ခုခုမှတဆင့်ဖြတ်သန်းနေကြသည်ခံစားချက်ရှိသည် ပိုပြီးမိန်းကလေးများမှဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: အသက်အရွယ် 28 (ဖွင့်မဖွင့်နှင့်ရည်းစားနှင့်အတူလျှော့ပေါ့စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်ပုံကိုသတိပြုပါ။ )
ငါ့ရည်းစားနဲ့မတွေ့ခင်ငါမှာ porn ဒါမှမဟုတ်လေးလံတာတွေမရှိဘဲစိုက်ထူခဲ့တယ်လို့မထင်ဘူး။ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နားရွက်ထဲသို့တိုးတိုးလေးတိုးတိုးလေးတိုးတိုးလေးနားထောင်နေရင်းသူမရဲ့နောက်ကွယ်မှာရပ်နေတဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုအကြီးအကျယ်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲနွေ ဦး ပေါက်စေခဲ့တယ်။ ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ခံစားမှု။
ငါတက္ကသိုလ်ကသိတဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့စပြောတာနဲ့ငါ့စိတ်ပြောင်းသွားတာသတိပြုမိသည်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုနစ်မြုပ်ပြီးစကားပြောနေတာပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ဖြည့်တင်းပေးပြီးဒီ reboot ရဲ့အရေးကြီးမှုကိုသတိရစေတယ်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါမရည်ရွယ်ဘဲပြုံးတာကိုသတိထားမိတယ်။ ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်😀
အကယ်၍ သင်ဟာတစ်ကိုယ်ရေနေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာရည်းစားရဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရမယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာတွင်ထူးဆန်းသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်တကယ်ထူးဆန်းသည်မှာအခြားသူများနှင့်အရေပြားထိတွေ့ခြင်းကိုပုံမှန်အသားအရေမပါဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လူသားများလိုအပ်သည့်အာဟာရအမြောက်အများကိုပျောက်ဆုံးနေပြီးသင်၌ရှိပါကသင်သည်သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအလွယ်တကူလွတ်မြောက်သွားနိုင်သည်။
သင်လိင်မဆက်ဆံသောသူကိုရှာပါ။ ဒါကဒီနှင့်အတူအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမရှိရင်အဲဒါဟာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ် မင်းကိုရှုပ်ထွေးစေမယ့်ပလေတိုချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့မင်းမှာမင်းမှာအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းကြီးကြီးမားမားရှိတယ်၊ ထူးဆန်းတာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့နဲ့သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပေမယ့်စိတ်ရှုပ်စရာမရှိပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်
ငါဖြစ်ကောင်းငါပြန်လည်ကောင်းမွန်သကဲ့သို့ငါ့ကိုနှောက်ယှက်ခံခဲ့ရသည်သောဤ site ပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးဖြစ်ရပြီနှင့်မျှော်လင့်ရလဒ်များကိုမရှိခြင်းနှင့်အတူစိတ်ပျက်သူတို့အဘို့အချို့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပယ်: တစ်တသမတ်တည်းမိတ်ဖက်ရတဲ့ငါ့အဘို့ကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာခဲ့သည်။ ကြောင်းစိတ်ပျက်ခြင်းမပြုမီငါမြင်အားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Reboot ပြပြီး ၇ လမှစပြီးလိင်မသွားခင်မှာပရောပရည်ပြုခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ဒါကတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုနောက်တဖန်သွားတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အချိန်တိုအတွင်းခဲယဉ်းခဲ့ပြီးထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ဖို့“ မြန်မြန်ဆန်ဆန်” ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တိုင်းမှာငါ့စိုက်ထူမှုတွေကပိုမိုအားကောင်းလာတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ PE ၏မြင့်မားသောအဆင့်များကျဆင်းသွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ချစ်သူကိုနူးညံ့စွာနမ်းခြင်းအားဖြင့်ရုန်းကန်ရပြီးစိုက်ထူခြင်းအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြzeroနာလုံးဝမရှိပါ။
ထို့အပြင်ငါ၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးလိင်မှုကိစ္စဆက်လက်တိုးတက်နေမည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်စသည်အစတွင်မှတ်သားလောက်စရာမရှိသော်လည်း (တဖြည်းဖြည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်) ။ ငါအခက်အခဲလုံးဝမရှိဘဲတစ်ညမှာသုံးကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ဒီခရီးစကတည်းကငါဘယ်လောက်အထိရောက်လာခဲ့သလဲဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုရယူပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ဆက်သွယ်ပါ (အချစ်ရေးမဟုတ်ပါ) အချိန်ယူပါ၊ ၎င်းသည်ဖော်ပြရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာငါ့အတွက်အချိန်အများကြီးပေးပြီးတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်အပြောင်းအလဲများကိုသာငါမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ၉ လအကြာမှာငါဟာပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးထွက်ရှိရုန်းကန်သူအားလုံးအတွက်ဒီနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ကိုမျှဝေရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သမျှကိုမည်သူမျှမဖြတ်သန်းနိုင်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အပြည့်အဝပြန်ဖွင့်အကောင့်
[ဒီကောင်လေးသည်သူ၏ reboot တစ်လျှောက်လုံးအဆိုးမြင်အဆွေခင်ပွန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှစိတ်ကူးယဉ်၏3လပြီးနောက် ... ]
ငါနောက်တဖန်စိတ်ကူးယဉ်စတင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမဟုတ်ပေမယ့်တကယ်မိန်းကလေးတွေ၊ လိင်၊ သူတို့နဲ့ငါလိုချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း။ သုံးလကြာတော့ကျွန်မရဲ့လိင်တံကိုတဖြည်းဖြည်းနှိုးလိုက်တယ်။ ဒါကမိန်းကလေးစစ်စစ်တွေနဲ့တကယ့်ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုနဲ့အတူကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ပြန်ကောင်းလာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ညစ်ပတ်ပေရေနေသောစကားပြောခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်စာပို့ခြင်း။ လူသားတွေဟာပုံမှန်ပဲ၊ porn ပုံမှန်မဟုတ်သော
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူသုံးလမှာ reboot လုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။
အကြံပြုချက် #2: ပုံမှန် Touch ကိုမှဝါယာကြိုး:
ထိပ်ဖျား: သင့်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုသည်အထိပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဖို့ကြိုးပမ်းရန်မလိုပါ နိုင်စွမ်း ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်၏။ သင် reboot မလုပ်မချင်းလအနည်းငယ်ကြာသည်အထိစောင့်ချင်ပေလိမ့်မည်။ အချိန်မတန်မီလုပ်ဆောင်မှုသည်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ သင်သေးသိမ်သိမ်မွေ့သောအာရုံကိုမခံစားရနိုင်သေးပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သွေးဆောင်မှုကိုခံရပါလိမ့်မည် overstimulate ကိုယ့်ကိုကိုယ်အစွန်း ... နှင့်ဖြစ်ကောင်းပြန်ဆုတ်။ ဒီနေရာမှာညစ်ညမ်းဆေးစွဲတဲ့ကုသသူရဲ့အစီအစဉ်။ '' အောက်မေ့ '' တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (ဗြိတိန်ကုထုံး Paula ခန်းမ) ၏အနုပညာသင်ယူခြင်း
ဒီအကောင်လေး (26) ဝန်းကျင်လေးလမှာ rewiring ဖြစ်စဉ်ကို (သို့သော်နှစ်လလည်းဖြစ်ကောင်းဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်) စတင်:
ငါ reboot လုပ်နေတာလေးလကျော်ပြီ။ porn နှင့် masturbation မပါပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါငါ့စိုက်ထူအပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါကဒီရက်သတ္တပတ်တိုင်းနံနက်တိုင်းနီးပါးနံနက်ထင်းခုတ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အချို့ကတော့ ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်၊ တချို့ဆိုရင်တစ်နာရီတောင်တောင်ကြာခဲ့ဖူးတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ပြီးဂုဏ်ယူသည်။
ဒီမှာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီဖိုရမ်အတွက်တခြားယောက်ျားတွေလိုပဲငါကငါပဲတစ်နေ့နေ့မှာဖြစ်ပျက်မယ်လို့ယုံကြည်သော်လည်း, တစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်ဤမျှကာလပတ်လုံးယူပြီးခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်လေ့ရှိတယ်။ ဤကာလအတွင်းငါမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တစ်နည်းနည်းခဲ့ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုများ watched နှင့် ejaculating မပါဘဲ masturbated ။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ငါသည်ကိုယ်စမ်းသပ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောစဉ်းစားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ၄ လရောက်သော်ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရေချိုးတိုင်းနီးပါးကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအလင်းအနှိပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်ဝှေးစေ့တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့အလင်းနည်းနည်းနဲ့လေဖြတ်တယ်။ ငါစိုက်ထူအတင်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး။ တစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အနှိပ်ခံခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်၏ကောင်လေးကပိုမိုကောင်းမွန်စွာတုန့်ပြန်သည်ဟုခံစားရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါခဲယဉ်းသောနံနက်သစ်သားရ။ ဒါကငါ့အတွေ့အကြုံပဲ၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မသေချာဘူး။
ဒီစမ်းသပ်မှုကိုသုံးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်က ၄ လဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သမိုင်းကြောင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါအသက် ၁၀ နှစ်ကတည်းကငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုရဖို့အတွက် ၂ နှစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ နှစ်အစောပိုင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစတင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးလိုအပ်တယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၅၀၊ ၆၀% လောက်လှုံ့ဆော်ပြီးရပ်လိုက်တယ်။ ဤနေရာတွင်အရေးအကြီးဆုံးသော့တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် reboot ကာလအတွင်းဘယ်သောအခါမျှသုက်မပြေးသင့်ပါ။ အကြောင်းပြချက်မှာဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်အားပြန်လည်ကျန်းမာလာရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်အဟာရနှင့်စွမ်းအင်များစွာလိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်လည်းအစောပိုင်းအဆင့်မှာကိုယျ့ကိုယျကိုမစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒီဟာနယ်စပ်မှာပဲရှိသေးတယ်။
ဤသည်စိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုကာယလှုပ်ရှားမှုဖိအားမရှိဘဲအာရုံခံထိတွေ့မှုရှိစေရန်ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူမှုအစွမ်းသတ္တိကို“ ​​မစမ်းသပ်” ပါနဲ့။ ကာယဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ မင်းဆိုရင် do စိုက်ထူဖြစ်လာ, ကောင်းစွာပြန်အော်ဂဇင်၏ Edge နေ။
တစ်မိနစ်ဖို့ session ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ (သင် overheat စတင်မဟုတ်လျှင်), ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ကပြန်လုပ်ပါ။ တကယ်ပဲအဲဒီ session စဉ်အတွင်းအာရုံကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေးပါ။
အနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုသည်သင်၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်နှိုးဆွပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သက်သေပြနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်သင်သတိမထားလျှင်အရက်အလွန်အကျွံပြန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်နိုးထစေမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်ကိုပြသခြင်းအားဖြင့်အနည်းဆုံး ၂ လ PMO မပါဘဲ (porn, masturbation, orgasm) ဖြင့် rebooting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်သက်သေပြပါ။ သင်၏အရသာများသည်ပုံမှန်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုသည့်အချက်ပြမှုတစ်ခုမှာသင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အမှန်တကယ် 2D-D မိန်းမများကိုအလိုအလျောက်စတင်စဉ်းစားသောအခါသင်၏ porn memory မှ 3D counterparts များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ထပ်မံပြောခွင့်ပြုပါ - သင်မပြေးမီလမ်းလျှောက်ဖို့လိုသည်။ PMO နှင့်ရုန်းကန်နေရသူတစ် ဦး သည်အောင်မြင်သော reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ထိုအခါ အနည်းငယ် reawakening ဆွဖို့တိုးတက်မှုကို။
သူမ၏လာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်းစဉ်အတွင်းအနည်းဆုံး3သို့မဟုတ်4ကြိမ်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ဦးလိင်အင်္ဂါ / လိင်တံအနှိပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုရန်။ နေ့တိုင်းလုပ်နေတာလည်းအဆင်ပြေ, ဒါပေမဲ့သင်အမှန်တကယ်လိုလိုလားလားလဲလှယ်အတွက်သူမ၏အဘို့အ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်။ ဒါဟာသူမနှစ်သက်သောမယ်လို့သူမ၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုဖြစ်သင့်သည်။
လိင်အင်္ဂါအနှိပ်သည်အနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀ သာကြာသင့်ပြီး ၄၅ မိနစ်ထက်မပိုပါ။ ဤအချက်သည်သင့်အား“ အပူမရှိ” သို့မဟုတ်နှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ရန်တိုက်တွန်းလိုသည့်အချက်သို့တိုက်ရိုက်လိင်အင်္ဂါထိတွေ့မှုကိုလက်ခံရန်သင့်အားကူညီရန်ဖြစ်သည်။ မိန်းမအားမိမိအဝတ်ကိုဆုတ်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ မင်းရဲ့ကျောမှာအိပ်၊ ခြေထောက်ကိုဖွင့်ပြီးအနားယူပါ။
သူမသည်သူမ၏လက်ကိုဗာဒံဆီအနည်းငယ်သုံးပြီးသူမအားသင်၏ကပ်ပယ်အိတ်၊ ဝှေးစေ့၊ လိင်တံနှင့် perineum တို့ကိုညင်ညင်သာသာအလွန်အလွန်နှေးကွေးစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ သူမနူးညံ့ချောမွေ့စွာနူးညံ့စွာနူးညံ့စွာအသက်ရှူရှူပါရစေ၊ ဤအလင်းထိတွေ့မှုသည်သင်ဆက်လက်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ တည်ဆောက်ထားသည့်တင်းမာမှုကိုလွတ်မြောက်ရန်သင်၏လိင်တံပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနေရာများတွင်သူမ၏ပေါင်ခြံထဲသို့ (ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်တိုတိုလက်ချောင်းများဖြင့်) တွန်းတင်ပါ။ သူမကိုလိင်တံမထိုးရန်မတိုက်တွန်းပါနှင့်။ သူမသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့, အလင်းညှစ်ခြင်းနှင့်ရိုးတံနှင့် ဦး ခေါင်းတလျှောက်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြောင့်အထီးလိင်အင်္ဂါအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှတဆင့်တင်းမာမှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်-Up ကြုံတွေ့ခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, အမျိုးသမီးအနေဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိပ်နယ်၏ဤအမျိုးအစားသည်အလွန်အဲဒီဒေသမှာနာကျင်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာ။ ဒါဟာအလွန်ပြော့နဲ့အားမစိုက်ရ။
သင်အလွယ်တကူဖွင့်အပူလာမှကျရောက်နေတဲ့လျှင်ရေခဲတစ်ပန်းကန်နှင့်အိပ်ရာဘေးမှာအအေးမိ damp လက်ဆေးအထည်ရှိသည်။ အဖြစ်မကြာမီသင်သုတ်ရည်ဆိုလိုတာကအကျွမ်းတဝင် horny, အပြည့်အဝခံစားမှု, သင့်ဆီးကျိတ်အတွက် load မှစတင်ကြောင်းခံစားရအဖြစ်သူမကိုအနှိပ်ကိုရပ်တန့်နှင့်သင့်ဝှေးပေါ်အအေးအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းကိုနေရာချခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုနောက်ဆုံးမှာနိမ်လိမ့်မယ်ရှိသည်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြန်နှိပ်ဖို့သွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်နာကျင်မှုပေါ်ပေါက်အခါတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်များအတွက်အအေး compress လျှောက်ထား "အပြာဘောလုံး" သင်ရစေလျှင်, သတိရပါ။ ငါ့ကိုနာကျင်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ငါနောက်ဆုံးတော့ masturbating ဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်အခါဒါဟာတစ်ပါတ်အကြောင်းကိုသာယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောကျ, အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာချိန်ညှိနှင့် "အပြာဘောလုံး" ၏အပေါငျးတို့သလက္ခဏာတွေတစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အသှားကွ၏။
အဆိုပါ reboot နောက်မှငါအမှန်တကယ် resensitization တစ်ဦးမဖြစ်မနေကြောင်းယုံကြည် စာသားအလင်းနှင့်မဟုတ်သောရည်မှန်းချက် oriented မိမိကိုယ်ကိုထိတွေ့အပေါ်ခံစားချက်ပေမယ့်ဘာမျှကိုအာရုံစိုက်ဖို့နေ့တိုင်းအနည်းငယ်မိယူပြီးပြန်လည်နာလန်ထူ၏နောက်ဆုံးခြေထောက်မှအရေးပါသည်။ အဲဒီမှာခဏကျွန်မဘယ်နေရာမှာသွားခဲ့ပါသည်, ငါသည် 150 နေ့ကအမှတ်အသားအတိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလူတွေတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလက်ျာဘက်အရာအားလုံးကိုလုပ်နေခဲ့သည်ထင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအကြွင်းမဲ့အာဏာငရဲနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ သူတို့အားဆက်သွယ်မှုပြန်လည်တည်ထောင်အရေးကြီးပါသည်။ porn ကနေဝေးနေပါကလူအပေါင်းတို့၏အာရုံခံစားမှုအာရုံစိုက်ပါ။
ဒါ့အပြင်ငါ MO ကိုဤအချိန်ကာလအတွင်းလက်တဆုပ်စာကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည်အဆုံးမဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးကိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ ဒါဟာသင်သေချာပေမယ့်အများကြီးမနှေးကွေး။ P နဲ့ဝေးဝေးနေပြီးမင်းနေ့တိုင်းနီးကပ်လာလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါကသင့်အားခေတ္တခဏ“ ကဲ့ရဲ့” ရန်ပြောရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ သူတို့ကိုဖြည်းညှင်းစွာနှိပ်ပေးပြီးခါးပတ်areaရိယာအောက်ရှိအရာအားလုံးကိုစုပ်ယူပါ။ ငါဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏နောက်ဆုံးခြေထောက်ဖြစ်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောပျောက်ဆုံးနေဖြစ်ကြောင်းကတိပေး။ သင်၏အမှိုက်ကိုလျစ်လျူရှုရုံဖြင့်ဂရုစိုက်ရန်နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါ။
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုသက်သာရာနှင့် masturbate ဖို့တိုက်တွန်းရှောင်ရှားအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်လိင်အင်္ဂါနှိပ်နယ် (သာဝှေးမရှိရိုးတံ) ဖျော်ဖြေတွေ့ပြီ။
ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်စစ်မှန်သောလိင်ကိုရှာဖွေခြင်း: ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအလဲကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီးနောက် ၃ လအကြာ၌ပင်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်စိတ်များရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်လိင်မှုကိစ္စနှင့်စိတ်ရောဂါစွဲကပ်နေဆဲဖြစ်သောလိင်စိတ်ကိုမုန်းတီးခြင်း၊ ။ အဲဒါကကျွန်မအတွက်တကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ ဦး နှောက်ကိုကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်ရာကိုရှင်းပြပြီးအားဖြည့်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌အမျိုးသမီးများမရှိသောကြောင့်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ ထိခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုအပြည့်အဝသတိပြုမိခြင်း၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးချင်တဲ့စိတ်ကပြန်လာပြီး ED နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုခံစားချက်အသစ်ကိုအစားထိုးနေတယ်ဆိုတာအခုတွေ့နေပြီ။ ငါ erectile ရဲ့တုန့်ပြန်မှုတိုးတက်လာတာကိုသတိပြုမိပြီးငါဟာပိုမိုကြာရှည်စွာနဲ့ကြာရှည်စွာစောင့်ရှောက်နိုင်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုရူးသွပ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးမှာကျွန်ုပ်သည်အစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည့်တိုင်အောင်နိမ့်သောလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အာရုံငါးပါးတို့ထိရန် Rewire! နက်ရှိုင်းစွာထွက်သက်တော်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်ပါ, အိပ်ရာ၌အိပ် (5 အတွက်စက္ကန်,5ထွက်စက္ကန်) နှင့်သင့်လိင်တံနှင့်ဝှေး, သင့်ခန္ဓာကိုယ်မထိသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင် massage မှလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးပါ။ ငါ့အဘို့, ဒီရှည် reboot သာအနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုပြီးနောက်မှတဆင့်ချိုးပဲ!
ငါစုံတွဲတစ်တွဲရက်ပေါင်းအဘို့အတိုက်တွန်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ငါကြီးမားတဲ့တယ်။ မင်္ဂလာပါ။ တိုက်ခန်း။ ငါဖြစ်နိုင်သည် 6+ လကြာကားမောင်းရန်ပြောနေတာပါ။ အသက် ၁၇ - တစ်နှစ်
ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါ NoFap ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီး ၁၀၅ ရက်ကြာခဲ့တယ်၊ တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခု။ ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်များကအလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်အကျိုးရှိသည်မှာသေချာသည်။ ငါအကြားအသေးအဖွဲ flatlining ကြုံတွေ့ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခဲ့ငါ့ကိုဘဝတိုးတက်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်နေ့ ၈၀ လောက်ကစပြီးအကျိုးခံစားခွင့်တွေကုန်သွားပြီး၊ ငါဟာအမြဲတမ်းငြီးငွေ့လာပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကဘဲကျွန်ုပ်ရဲ့မောင်းနှင်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါဟာနောက်တစ်ခုကထပ်မံပြိုကွဲသွားတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကလုံးဝကောင်းမလာခဲ့ဘူး၊ ငါဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့ငါတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဒီရက်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူး၊ ။
ဒါကြောင့်ယနေ့ငါနောက်ဆုံးတော့အတွက်ဂူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှင့် masturbate ။ က NoFap ရှေ့၌နဲ့တူမကြီးတွေစီးပွားရေး, porn နှင့်အမြန်ခြင်းမရှိဘဲ, စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ထိုအငရဲငါပိုကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်! ငါမမောတော့ဘူး၊ ဖိအား၊ တုန်ခါမှုကုန်ပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့တခြားအရာတွေကိုပြန်အာရုံစိုက်နိုင်ပြီ။
ဒါကြောင့်နိဂုံးချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို (ဤတွင်ပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာ) ကိုပယ်ရှားနေသရွေ့၎င်းကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မချဘဲလုံးဝပြီးပြည့်စုံသောအသုံးချမှုမဟုတ်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအချို့သောအရာများဖယ်ရှားပစ်ရန်သဘာဝနည်းလမ်း
Edit: ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ် - NoFap ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အားစိုက်ရကျိုးနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါရက် ၉၀ ကိုငါ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ထားခဲ့ပြီးသင်နှင့်အတူတူပဲသင်လုပ်သင့်သည်။ ဒါကငါ့ဘဝကိုတိုးတက်စေပြီးမင်းရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေတယ်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအမြဲတားမြစ်ရန်ကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် fapping နှင့်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားထောင်ပါ။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် - ED သည်လက်ထပ်ပြီး Karezza
[နေ့က 75 မှာ] ငါရည်ညွှန်းသောအလင်းအနှိပ်နှင့်အတူ masturbated ဒီမှာ။ ငါကဖုန်းခေါ်နီးပါး admirabation။ ပိုများသောအော်ဂဇင်သို့မဟုတ်နီးစပ်အော်ဂဇင်ရပင်တစ်ကြိုးပမ်းမှုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ kegel ဆှဲ, နှေးကွေးနေပွတ်နယ်နှင့်အတူနောက်တဖန်အကောင်းတစ်ဦးအစိုင်အခဲစိုက်ထူရှိခြင်း၏ကာမဂုဏ်အခမ်းအနားနှင့်တူ။
ဒီနေရာမှာ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်များအတွက်နောက်ထပ်နည်းစနစ်:
ငါလိင်တံ၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ exfoliate ပွတ်တိုက်အကြံပြုလို့ရမလား? ငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြောင်းကြိုးစားခဲ့ကြောင့်အရာရာအများကြီးချောမွေ့စေတော်မူသည်ကိုအနည်းငယ်အသားအရေပျက်စီးမှုကိုတက်ရှင်းလင်းရန်သလိုပဲ, ချက်ခြင်းပြင်ပပေါ်တွင် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အဓိကပြဿနာကသင့်ဦးနှောက်၌တည်ရှိ၏။ သို့သော်လည်းငါသည် exfoliation အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်သွားလာရင်းထိုက်သည်လို့ထင်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်အကြှနျုပျအဘို့အဘယ်သူမျှမ pm တွင်နေ့ 160 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါငါ့လိင်အင်္ဂါနဲ့အဆက်အသွယ် reestablishing ့ယေဘုယျအားလုပ်ရပ်တွင်ပိုမိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သော်လည်းငါလိင်အကြိမ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါပြီ။
ငါ exfoliation ရှည်လျားသော reboot လုပ်နေခဲ့ကြသောယောက်ျားတွေအဘို့အကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, ပို။ ပင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို။ ပင်ဒါကြောင့်သူတို့ reboot အတွက်အစောပိုင်းဖြစ်ကြပြီးထိုကဲ့သို့သောရေတွက် ဦး နှောက်ရှိသည်ဆဲယောက်ျားတွေ။ ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိင်အင်္ဂါအသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကငါဟာဘယ်လောက်ထိအဆက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာခံစားမိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ တစ်ညတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလင်းထိတွေ့မှုကိုစတင်ခံစားလာပြီးအရေပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်မခံစားရနိုင်ဟုခံစားမိသည်။ ငါ့မှာအရေပြားပျက်စီးမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်၊ ဒါကရိုးတံကိုအနည်းငယ်စိတ်ထိခိုက်စေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါဒါကိုစမ်းသပ်တာပဲ။
တစ်နေရာရာမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ချောဆီအရည်ပျော်မှုမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကအရေပြားကိုထူလာစေပြီးအာရုံခံစားမှုကိုလျော့နည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့်exရိယာကိုသုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာအဲဒီတည်ဆောက်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ထိုအလုပ်ခဲ့တယ်! အဲဒီမှာချက်ချင်းပဲချောချောမွေ့မွေ့ခံစားလာပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါကကျွန်တော့် ဦး နှောက်မှာအာရုံခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုအရေပြား sensitivity မရှိခြင်းနဲ့ခွဲခြားနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။
ငါထင်တာကတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာ reboot လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ libido ကိုစဖွင့်ဖို့နဲ့ rewiring လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်လိင်ကိစ္စကိုပိုမိုနှစ်သက်စရာဖြစ်လာသည်။ သင်ထောက်ခံသည့်ဗာဒံဆီအနှိပ်နှင့်လည်းတကယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ငါသည်လည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအာရုံကိုမှအသုံးပြုလာပြီစတင်ရန်အမွေးနှင့်အတူအလင်းထိစမ်းသပ်ထွက်သွားခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါထို့နောက်ပြီးနောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ချောဆီကိုမှအုန်းသီးရေနံနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီတာမင် -E ကိုအသုံးပြု။ , exfoliation လုပ်ဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အစောပိုင်း reboot လုပ်သောယောက်ျားများအတွက်အထူးသဖြင့် flatline အဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ငါကျိန်းသေအနည်းဆုံးအပတ်စဉ်ဆက်ပြောသွားလိမ့်မယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအမျှင်ဓာတ်များအတွက် $ 500 ကျော်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ငါလိင်မစတင်ခင်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို porn နဲ့မသုံးပဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြissuesနာရှိနေသေးတယ်။ PMO ကိုစဉ်းစားမယ့်အစားလိင်ကစားစရာအကြောင်းကျွန်တော်စစဉ်းစားမိပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေမစဉ်းစားသေးဘူး။ fuck ဆိုတဲ့အရုပ်တွေနဲ့မတူဘူးလားမသိဘူး။ IMO က reboot ကိုဟန့်တားလိမ့်မယ်။ ဒီဟာတွေကစျေးမကြီးဘူးလား။
အကြံပြုချက် #3: Porn-အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
ရည်မှန်းချက်မှာစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ YBOP သည် NoFap မဟုတ်ပါ။ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရွေးချယ်လျှင်အချိန်ဇယားတစ်ခုနှင့်စတင်လိုပေမည်။ နောက်ဆုံးတွင်ယောက်ျားများစွာသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်ရလိမ့်မည်။ တခါတရံသင်“ ထိုနေရာသို့ရောက်နေပြီ” ဟုသင့်အားအသိပေးသည့်ထင်ရှားသောလက္ခဏာများမရှိပါ။ ပြtroubleနာက ... အကယ်၍ သင်စောလွန်းပါကစမ်းသပ်ပါကသင်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသည့်အရသာသို့ရောက်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုန်းကန်နိုင်သည် The Evil 'Chaser။ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ porn (သို့) porn အစားထိုးမသုံးပါနဲ့၊ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါသည် သာ sensation မှ masturbating (အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးယဉ်) ။
သင်ကျန်းမာပြီးအမှန်တကယ်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်စမ်းသပ်မှုသည်အကျိုးရှိပုံရသည်။ ဒီကိုဖတ်ပါ ကောင်လေးရဲ့ပုံပြင်။ မှန်ကန်သောအဖြေတစ်ခုမှမရှိပါ။ ဦး နှောက်အပေါ်လိင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်းများအကြောင်းသိပ်မသိရပါ။ ဤသူသည်ရှည်လျားသော rebooters များအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် asstinst ကာလကိုအကြံပြုခဲ့သည်။
ငါသညျအမှနျတကယျများအတွက်လှည့်ကွက်ယုံကြည်ကြဘူး ရေရှည် rebooters ကအော်ဂဇင်ကိုရှောင်ရှားပြီးသူတို့ရှိခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်စွာဖြစ်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်သည် အကောင်းဆုံး ပြန်လည်နာလန်ထူရန်လမ်းကြောင်းသည် ~ ၈-၁၀ ရက်သတ္တပတ်ကြာသည် orgasm မပါဘဲ၊ နောက်တွင် ONG အော်ဂဇင်တစ်ခုမပါရှိဘဲ (ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုတော့ပါ) ပြီးနောက်သင်ပြီးစီးသည့်အထိရောက်ရန်အထိပြန်လုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးအချိန်မှာသင်သည်ဤအချိန်အတွင်းပြင်းထန်စွာပြန်လည်လည်ပတ်နေလိမ့်မည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်မရှိလျှင်၊ ၈-၁၀ ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးတွင်စင်ကြယ်သောခံစားမှုမှ MO session တစ်ခုသည်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
၉ လကြာ၊ သင်စိုက်ထူမှုမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုစမ်းကြည့်ပါ။
'' ဖယောင်းနဲ့ဆုတ် 'ကြိုးစားပါ။ ဖယောင်းနဲ့ဆုတ်တက်လာပြီနဲ့ကြီးမားတဲ့စိုက်ထူရရှိလေ့ကျင့်ရန်သင့်အားအားပေးရာ masturbate ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်ရှိသည်ဤ: သင်စတုတ္ထအချိန်ထှတျအထိပျအဘို့ထိုသို့ပြုလျှင်, ထို့နောက် unerect get နောက်တဖန်သင့်ရဲ့လိင်တံစိုက်ထူရပြီးတော့သူက unerect ရကုန်အံ့, တဖန်ဒီပြန်လုပ်နှင့်ကြကုန်အံ့, ထို့နောက်သင့်ရဲ့လိင်တံစိုက်ထူရ။ သင့်ရဲ့ကိုသုံးပါ
သာစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သင့်ငါးပါးအာရုံစိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့နေဆဲ porn (ပြော9လအတွင်း minimuim) မှရှောင်၏ရှည်လျားသောကာလပြီးနောက်မိန်းမနှင့်စိုက်ထူဖို့ရုန်းကန်နေလျှင်သာလျှင်ဒီအလုပ်ပါ။ အသက် ၂၁ - PED သွေးဆောင် ED, HOCD နှင့် Vagina Phobia တို့သည်နှစ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်
ဤလူ၏နည်းသည်ကြာရှည်စွာ reboot လုပ်ပြီးနောက်၊ အချို့အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သူသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းသူဖြစ်ပြီး ၁၉ နှစ်အထိပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူမကဲ့သို့မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမပြုလိုပေ။ သို့သော်ရက်သတ္တပတ်များစွာပိတ်ထားသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသက် ၂၅ နှစ် - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမလျှော့ဘဲ Porn-Induated ED ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ခဲ့သလဲ
အကြံပြုချက် ၄။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုး
ဆုံးမသွန်သင်အမျိုးမျိုးသောဓလေ့ထုံးစံ စွမ်းအင်စောင်ရေလေ့ကျင့်ခန်း လိင်စွမ်းအင်ကိုထိန်းညှိသည်။ အချို့သည်လိင်တံ၏အမြစ်မှအပူသို့မဟုတ်စွမ်းအင်ကိုမြင်ယောင်မြင်ယောင်စေသည်။ “ ကြည့်ပါ။မီးရှူဥပမာ "technique ကို။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည်ယောက်ျားအချို့အားလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအား၎င်းတို့၏လိင်တံရှိခံစားမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ (အမြင်အာရုံကိုနှိုးဆွခြင်းမှသာလျှင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတင်းကြပ်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဲ့သို့) ဒီလူက
စွမ်းအင်လည်ပတ်မှုကိုကြိုးစားပါ။ ငါငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျိန်ဆိုတယ် သင်၏လိင်အင်္ဂါများကိုစွမ်းအင်ဖြင့်“ အပူပေး” စေရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်၏လိင်တံထဲသို့သင့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ငါ့အတွက်တော့ငါဟာငါ့ရဲ့အာရုံကိုငါ့လက်ထဲဆွဲထည့်သလိုမျိုးငါအဲဒီထဲမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လိင်တံကိုအတွင်းပိုင်းကနေအရှည်တစ်လျှောက်လုံးခံစားနိုင်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုကိုသတိပြုမိမှာပါ။ ငါဒီနေ့မနက်မှာစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျန်အရာတွေအားလုံးဟာတစ်နေ့တာရဲ့ (နိုးနိုးကြားကြားရှိစိုက်ထူခြင်းစတာတွေ) ကိုပိုပြီးနိုးထလာစေတယ်။ ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါ - စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုလေ့ကျင့်ခန်းက PMO ကိုရက်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားပေမယ့်ရလဒ်မမြင်ရတဲ့သူများစွာအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
လိင်စွမ်းအင်ကိုနိုးထရန်အတွက် - အချက်နှစ်ချက်ကိုစတင်ပါ။ နံနက်တိုင်းအိပ်စက်ခြင်းပြီးနောက်အခန်းအလယ်၌မတ်တပ်ရပ်ကာတစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပါ။ လှုပ်ခါသောသူ - ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြေချောင်းမှ ဦး ခေါင်းသို့လှုပ်ခါပြီး၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ကိုပေးနေသည့်အလားအော်ဂဇင်နီးပါးရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ပျော်ရွှင်မှုခံစားပါ၊ အာဟာရဖြည့်ပါ။ အသံအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်လိုပါက၎င်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ ပျော်မွေ့ပါက ၁၀ မိနစ်မျှခံစားပါ။ ထို့နောက်တစ်ကိုယ်လုံးကိုသုတ်ပဝါနှင့်ပွတ်ပြီးရေချိုးပါ။ နံနက်တိုင်းလုပ်ပါ၊ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းချိန်ခွင်လျှာညှိလိမ့်မည်။ လင့်ခ်
ငါနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအမျိုးသမီးတွေ, ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်စိုက်ထူမရနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပြissueနာရှိခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲခက်ခဲတဲ့အရာမဖြစ်ဖို့ဆိုတာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။
ငါ 100 လအတွင်းသို့ရတယ်သည့်အခါတစ်ဦး4+ နေ့ကပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်, ကိုယ့်ငါစိတ်ပိုင်း Reboot လုပ်သွားခဲ့ပါသည်သိတယ်, ငါစိတ်ပိုင်းအမှုအရာအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံစားရရန်စတင်ခဲ့သည်။ ငါတင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီတစ်ခုအံ့သြဖွယ် Bum မြင်သောအခါဒါဟာရှေ့မှကွဲပြားခြားနားကြီးနှင့်သင်ထင်သာရှိသောကြောင့်, ထိုသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်၏ပူပြောပြ သင့် ဖြစ်ပေမယ့်သင်တကယ်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
ငါဤပြန်လည်စတင်, ပြန် -to- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - နှိုးဆော်ခြင်းအဆင့်သို့ရောက်သောအခါ, ငါ့လိင်တံကအဘယ်သူမျှမဘဝရှိခဲ့သည် - အစဉ်အဆက်, ငါတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ထင်တဲ့အချိန်လေး၏စုံတွဲတစ်တွဲသာ, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး ၌လူကိုကြည့်ကဲ့သို့တ မေ့မြောနေတဲ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်မျက်ခွံတောက်တောက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေတာကိုမြင်ပြီး 'သူအရင်ကဒီလိုလုပ်ခဲ့ဖူးလား၊
ဒါနဲ့စတင် Kegel လေ့ကျင့်မှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောရရင်သူတို့ဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့၊ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့စိုက်ထူမှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။ ကောင်းပြီဒါကြောင့်တစ် ဦး အားရစရာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်နံနက်ခင်းဘုန်းအသရေနှင့်နိုးထခဲ့ပြီးတစ်နေ့လုံး gd semi ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစမ်းသပ်ပြီး ၁၀၀% ရှိခဲ့သည်ကိုကြာရှည်စွာမှတ်မိနိုင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့မျက်စိပိတ်နှင့်လက်ျာကြွက်သားကျုံ့ဖို့ကြိုးစားနေ, ဒီနောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပြန်လည်လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးရှုထောင့်ခဲ့ပေမယ့်မယ့်တစ်ဦးဦးသေဆုံးစှကဲ့သို့ရှိကရှိခြင်းမဟုတ်, တဖန်သင့်ရဲ့လိင်တံထင်နှင့်အခံစားရရန်ရှိခြင်း။
Kegels - ဦး နှောက်ကိုလိင်တံနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လိင်တံကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း။ အခုတော့ငါsssssssအတွက်ရွေ့လျားမှုကိုမမွငျလြှငျပြီးနောက်ကတစ် ဦး သုတ်ပဝါဆွဲထားနိုင် !!
ဒီမှာယောက်ျားတွေတော်တော်များများကသူတို့ကသူတို့ရဲ့လိင်တံကိုမခံစားရဘူး။ ငါတို့လိင်အင်္ဂါကိုအဝတ်အစားတွေထဲထည့်ပြီးဆီးသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ဆက်ဆံဖို့သူတို့ကို“ လိုအပ်တယ်” သည်အထိလျစ်လျူရှုထားတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဟာ“ ရင်သားကင်ဆာအာရုံစိုက်မှု” လုပ်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့လိင်တံခံစားမှုအကြောင်းတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တယ်။ သတိထားမိခြင်း။ အစွန်အဖျား၊ ရိုးတံနှင့်အောက်ရှိအရာများ၊ အမြစ်နှင့်ဝှေးစေ့စသောအရာများဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းသူတို့ကိုသတိထားမိရုံဖြင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်း။ ပြီးတော့ငါအဲဒီမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးအဲဒီမှာသတိကြီးစွာနဲ့ကြံစည်နေတဲ့တွေးတောမှုအချို့။
ဒါဟာတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ထိုင်၊ မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးသင်၏လိင်တံကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ သင်၏စိတ်ထဲတွင်အမြင်အာရုံကိုကြည့်ရှုမည့်အစားအတွင်း၌ခံစားရရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါပါပဲ။ သုတ်ခြင်းနှင့် repeat.It တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့အရာဖြစ်၏။ ထိုင်၊ မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးသင်၏လိင်တံကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်၏စိတ်ထဲတွင်အမြင်အာရုံကိုကြည့်ရှုမည့်အစားအတွင်း၌ခံစားရရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါပါပဲ။ သုတ်ခြင်းနှင့်ထပ်လုပ်ပါ။
ဤလေ့ကျင့်မှု၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအထူးသဖြင့်လိင်တံ၏အမြစ်ကိုခံစားနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ယနေ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏အမြစ်ကိုအာရုံစိုက်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရမှု၏အကျိုးကိုများစွာဖြစ်စေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူမ၏လိင်အင်္ဂါတွင်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုခံစားရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ပြီးသူမသည်လည်းကျွန်ုပ်အားကြီးမားသောအကဖြင့်ခံစားမိသည်ဟုခံစားမိနိုင်သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ငါဘာမှမခံစားရဘူး ဒါနဲ့ငါလှုပ်ရှားမှုသေးသေးလေးတွေလုပ်တယ်။ ငါလုပ်နေတာ kegels, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း။ တစ်မိနစ်အကြာမှာငါအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်တံခေါင်း၏ခြေရင်းမှာ, ပြီးတော့အမြစ်မှာ။ ငါလုံးဝရိုးတံမခံစားရဘူး ငါဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ခဲ့လဲမသေချာပေမဲ့အရမ်းစိတ်သောကရောက်လို့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်ဘဲစွမ်းအင်နှင့်ဆက်သွယ်နေပြီး၎င်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့၊ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ပါ။ ငါနောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံသည်အထိငါဆက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါရလဒ်နှင့်ပတ်သက်။ စပ်စုမိပါတယ်
သင့် ဦး နှောက်သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသောအခါအရာများကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သို့လွှဲပြောင်းရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကရှင်းပြသည် -
ယနေ့ငါနောက်ဆုံးတော့မိနစ် ၃၀ ကျော်ကြာပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကျောက်ဆောင်ထဲ၌နေပြီးခိုင်ခံ့သောကျန်းမာသည့်စိုက်ထူမှုဖြင့်တဖန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၂၂ ရက်ကြာမသေချာမရေရာမှုများနှင့်စိတ်ပျက်စရာများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးတွင် reboot အလုပ်လုပ်နေကြောင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ED နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရုန်းကန်နေရမှုသည်နိဂုံးချုပ်သွားသည်။
PMO ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအပြင်ငါ့ကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေသောနောက်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိသည်။ အပန်းဖြေ SO အရေးကြီးကြောင်းထွက်လှည့်! ခန္ဓာကိုယ်ကနေကုစားပြီးတာနဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ဟာသင့်ရဲ့ယူနစ်ကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ED ကိုပေးတယ်။ ငါသတိလစ်နေတဲ့ငါ့ရင်ဘတ်နှင့်အစာအိမ်အတွက်တင်းမာမှုတွေအများကြီးပေါ်သို့ကိုင်ထားခဲ့သည်။ အနားယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကနေပိုပြီးခံစားရတော့တာပဲ။
ငါစိတ်အေးလက်အေးရှိတဲ့အခါကျွန်မရဲ့လိင်အင်္ဂါထဲမှာနာကျင်ကိုက်ခဲတာကိုခံစားရတယ်၊ ငါဟာသဘာဝပြည့်ဝပြီးပြည့်ဝတဲ့အသက်ရှူတာကိုခံလိုက်ရတယ်။ ငါ့ကိုလှည့်ပေးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျွန်မရဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့ဝမ်းဗိုက်ကထွက်လာတဲ့အရည်ပျော်မှုတွေကြောင့်ကျော်လွှားသွားတယ်။ အခုငါဖွင့်ချင်တဲ့အချိန်မှာငါဟာအပန်းဖြေအနားယူဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးကအားသွင်းရုံသာမကတိရိစ္ဆာန်တွေလိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျက်ဆီးချင်နေတယ်။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများသည်ဤအရာသည်အခြားသူများကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဒီစိတ်အေးဆေး / စွဲချက်တင်ခံစားမှုကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမသိဘူး။ အဲဒါမရှိရင်ငါထင်သလိုသူတို့ဟာ 'စဉ်းစားတွေးခေါ် / တင်းမာမှု' mode မှာဆက်နေနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
အပန်းဖြေရန်ကျူးလွန်၏တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွင်းမှာပဲကျွန်မချက်ချင်းအလွန်အားကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုမြင်နေစတင်! ထို့အပြင် kegel လေ့ကျင့်ခန်း နှင့်အော်ဂဇင်ကနေရှောင်ကျိန်းသေငါ့ကိုတစ်ခုလောက်မရှိတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ကူညီပေးခဲ့သည်!
သင်ဖော်ပြသည့်ဤအပန်းဖြေမှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ မနေ့ကငါမှာတစ်နာရီလိုမသွားဘဲလုံးဝကျပန်းစိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ ဒါကနှစ်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်။ ဒီတက်စောင့်ရှောက်ရန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှား။
၂) အစားအသောက်ပြောင်းလဲမှုသည်ဤလူအားသူ၏စွဲလမ်းမှုကိုကူညီပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် flatliners များနှင့်သက်ဆိုင်ကောင်းရှိနိုင်သည်။
၂၉ ရက်ရှိပြီ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမကြည့်ဘူး ငါ့မှာစွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အိပ်တယ်ပိုကောင်းတယ်၊ ငါ့ရဲ့ခံစားချက်ကပိုပြီးတည်ငြိမ်တယ်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြိုးစားကြည့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အစားအစာပြောင်းလဲမှုငါ့ကို pornfree ဖြစ်လာဘယ်လိုကူညီပေး
3) ဤယောက်ျားတွေခုန်-စတင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူ (အဖြစ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြတ်)
နောက်ထပ်ကောင်လေး (ဒီတစျခုမကြိုးစားမီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အတူ Check!):
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၈၁ တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အပြားပြားလမ်းကိုအစောပိုင်းကတည်းကရှိခဲ့ဖူးသည်။ ပထမ ဦး စွာငါအများကြီးသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်နှင့် libido အာနိသင်တိုးမြှင့်အဖြစ်ချိုသောဆိတ်ကိုပေါင်းပင်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ခန္တီကိုယ်ထည်မှာ bodybuilding.com ကိုသုံးပြီးချိုဆိတ်ပေါင်းပင် (icariin) နဲ့ yohimbe, maca, and tribulus စတဲ့တခြား aphrodisiacs ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ငါတစ်ပါတ်အတွက် flatline ထဲကဖြစ်ခဲ့သည် ... သင်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီမိနစ် 81 ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အဲဒါကိုအမှီသဟဲပြုပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါ။
အတော်များများကလေ့လာမှုများဘယ်လိုထွက်လာ အင်တာနက်စွဲ နှင့် အင်တာနက်ညစ်ညမ်း မူးယစ်ဆေးစွဲကဦးနှောက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုဆင်တူနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲ။ အဆိုပါအိုဝါလေ့လာမှုတချို့က ပါဝင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်၊ ဝိုင်းပယ် porn အသုံးပြုခြင်း။ အများစုကတခြားအမျိုးမျိုးကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြရှိလျှင်ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမခံစားရသောယောက်ျားတွေသိတယ်အများအားဖြင့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြောင့်ထိခိုက်, နှင့်အရာရှိပါသည်။
ယောက်ျားများစွာသည်အင်တာနက် porn ကိုစွန့်လွှတ်သောအခါ ပို၍ ကောင်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတယ်၊ အကယ်၍ သင်၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဟာယေဘူယျအားဖြင့်မဖြစ်မနေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်၊ သင်၏လက္ခဏာအချို့သည်လည်းထိုဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများမတိုးတက်ပါကအင်တာနက်အချိန်များစွာကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအစားထိုးခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ သဘာဝရှိခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းစသည်တို့ကိုအစားထိုးပါ။
ED က porn ပြtheနာရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြနေသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောလေ့လာမှုများကိုမူကျွန်ုပ်တို့မသိပါ ဒတ်ခ်ျလေ့လာမှု, အရာသာ compulsive များအတွက်အလားအလာမှာရှာဖွေနေခဲ့သည် (နှင့် erotica အရှိဆုံးစွဲလမ်းအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တွေ့ရှိ) ။ ထိုအချိန်မှစ. သို့သော်, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုယခင်ကထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာကြပါပြီ။
ရက်အနည်းငယ်မျှရေမြန်မြန်ရေ (စမ်းရေ) ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်သဘောသဘာဝရှိသည်။ ဒါကနောက်ထပ် long-rebooter အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံကို www.gettingstronger.org တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သငျသညျကလှုံ့ဆော်မှုနီးပါးမျှပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏နှေးကွေးပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှုကန် - start ချင်တယ်။ အချို့သူများအတွက် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ခန့်ထားပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့်အစားအစာသည်အရသာပိုကောင်းသည်၊ အရောင်များတောက်ပလာပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုများလည်းနိုးကြားလာသည်။
6) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးကိုသုံးပါ:
အသက် ၂၇ - ၁၁၅ ရက်၊ Levitra နှင့်စတင်သည်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ fap ဇာတ်လမ်းကိုအဆိုးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ ၁၁၅ ရက်လောက်ကြာတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော့်ကိုအထောက်အကူပြုခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းသေးသေးလေးနဲ့အကြံပြုချက်အချို့ပါရှိပါတယ်။
ငါ Nofap- စက်တင်ဘာလနှင့်အတူစတင် 75 ခန့်မှာ GF တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယနေ့မှာအိပ်ရာပေါ်ခုန်တက်ပြီးကျွန်တော်ဟာလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒမပါဘဲ၊ ED နဲ့မတွေ့ဘူး။ ငါဘာအကြောင်းမှားလဲဆိုတာသူမကိုရှင်းပြတယ်၊ သူမကနားလည်တယ်၊ ငါကကျွန်မကိုပြုပြင်တည့်မတ်ပေးခဲ့တယ်။ ပြproblemနာကလူတိုင်းဤသို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည် -“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့၊ အချိန်ပေးရန်၊ ခုန်ဖို့၊ နမ်းဖို့အတွက်နဲ့အရာအားလုံးကသဘာဝပြောင်းလဲဖို့အချိန်ပေးပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးပါနဲ့” (https://www.yourbrainonporn.com/will-sexual-enhancement-drugs-help-my-porn-related-ed).
ဒါပေမယ့်ငါ့အမှု၌, ကမကူညီခဲ့ပါဘူး ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ပါ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုစောင့်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ပြ2နာ ၂ ခုရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆန္ဒကိုဖြေရှင်းရန် aphrodisiacs များကိုစတင်စားခဲ့သည်။ (ငါအခွံမာ၊ ဂျင်းနဲ့ပျားရည်ကိုတစ်နေ့ ၂ ကြိမ်စားတယ်။ ) သူတို့ကကူညီပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကပိုပြီးအပူတပြင်းဖြစ်လာတယ် - ငါသူ့ကိုနမ်းချင်ပေမဲ့မစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ပါတ်အကြာငါ "ဒီ shit fuck ဆိုတဲ့" ငါကိုယ့်ကိုယ်ကို said - levitra ဆေးလုံးဝယ်လိုက်တယ်။ ထိုညတွင်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်မနေ့ကဆေးလုံးမထိုးဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအစက်တွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဒီညီမျှခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်အကြံပြုချက် - အိပ်ရာထဲမှာ (Nofap ရက် ၉၀ ကျော်) မှာ ED ရှိရင်လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပါ။ ငါ levitra ကိုအကြံပေးချင်တယ်။ ငါကနေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူး၊ ပုံမှန်ထက်သွေးပေါင်ချိန်နည်းနည်းပိုတယ်။
ရှည်လျားသော reboot များအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ယောက်ျားအချို့၏အတွေ့အကြုံများ -
နေ့ ၁၂၀ ပြီးတဲ့အထိငါ reboot ကုန်သွားပြီဆိုတော့ငါတကယ်မခံစားခဲ့ရဘူး (ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၁၆၀ ရက်နေ့ညနေဖြစ်သည်) ငါနေဆဲငါအချို့ rewire လိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါ (ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရှိလေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြု။ ) အဲဒီမှာဆင်း sensitivity ကို restore ရန်အချို့သောအချိန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအားထုတ်မှုယူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ငါရက် ၁၃၀ ပတ်လည်မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ထားသလိုမြန်တယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့် ၃-၄ ရက်ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သန္ဓေတည်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ထိုခက်ခဲသည့်အခက်အခဲကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် (နောက်ကျသည့်သုက်လွှတ်မှုကြောင့်ခံစားခဲ့ရသောနေရာ) ကြိုတင် reboot ပြုလုပ်နိုင်သလောက်ကြာရှည်စွာသွားနိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့် - ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများအပေါ်အလေးအနက်အာရုံစိုက်ခြင်း) နှင့်များစွာရှိသည်။ တိုးတက်လာသောစိုက်ထူအစွမ်းသတ္တိကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်။
တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးပိုမိုစိတ်ခံစားမှုအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အခြေခံပြန်ဖွင့်တာက ဦး နှောက်ကိုဘက်မလိုက်အောင်ပြန်ပေးတယ်၊ တကယ်လို့မင်းနေချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့သင်တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီးကတည်းကငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း၊ နံနက်သစ်သား (ငါအရင်ကမလုပ်ဖူးသေးသော) သစ်သားရှိခဲ့ဖူးပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်နိုးထသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကဲ့သို့ ပို၍ ကြီးမားသောအရောင်တောက်နေပုံရသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
[အခြားကောင်လေးမှအကြံဉာဏ်] ငါသည်သင်တို့ဖြစ်လျှင်, ငါထို့နောက်တက်ကြွစွာလိင်မှတဆင့်ဦးနှောက်ကို rewire ဖို့ကြိုးစားနေစတင်စွမ်းအင်စီးဆင်းမှု / လိင်အင်္ဂါအသိအမြင်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုပြုအကြောင်းကိုနေ့ 150 (သင်ပိုကောင်းရှိရာသို့အလျင်အမြန်ခံစားရမဟုတ်လျှင်) သည်အထိ ejaculating အပေါ်ချွတ်ကိုင်ထားမယ်လို့ ။
ငါတကယ်လုပ်ရပ်စတင်ခဲ့တခါငါ့ ဦး နှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတကယ်ခံစားရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်မိန်းကလေးထဲသို့ပထမဆုံး ၀ င်ရောက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၈၀% ခန့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ဒါပေမယ့်တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတော့ကျွန်တော်ဟာမ ၀ င်ခင်အထိခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ဆွေးနွေးမှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်အကောင်းမြင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ “ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ၊ သင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟူသောအတွေးသည်မှားယွင်းသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားက ဦး နှောက်ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းမှာကြားနေတယ် (ငါ့အတွက်ပိုကြာလိမ့်မယ်) လို့ထင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်တက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္toကိုယူရလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ ဦး နှောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလက fapping နှင့် porn ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ငါနှစ် ဦး စလုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီးသူတို့ဟာငါ့ဘ ၀ ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်။ ငါဟာလူငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတယ်၊ ​​ထူးဆန်းတဲ့အတွင်းစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလုံးလုံးလျားလျားနဲ့အပြင်းအထန်မစွန့်လွှတ်ဘဲနဲ့ငါအရှုံးပေးလိုက်တယ်။ Porn ဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ ED ကြောင့်ငါအတိတ်ကာလက ED ကိုတွေ့ဖူးတယ်။ ငါကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ ငါဟာမိန်းကလေးတွေရဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အရှိန်ပြင်းလာတာနဲ့အမျှငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
၁၀-၁၅ ရက်လုံးလုံးအဘယ်သူမျှမကြုံခဲ့ရသည့်အတွက်ဘဝအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကြီးမားခဲ့သည်။ fap သည်မည်မျှအကျိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်သော်လည်း ၃ ပတ်ခန့်အကြာတွင် flatline ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်နိုးထမှုကသုညအထိဖြစ်သွားပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာကျွန်တော့်အပေါ်လွှမ်းမိုးနေတယ်။ ငါ၌အခွင့်အရေးများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အပေါ်ပြုမူရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲငါအပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်ကြောက်သောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်။ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ ဒါဟာကြောက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာ asexual ခံစားရတယ်။
ငါပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းနီးပါးအစဉ်အဆက်အပတ်တွင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ပထမဦးစွာ၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်ထိုအခါမူကား၎င်းတို့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ခဲ့ရသောကျွန်မသိတယ်မိန်းကလေးငယ်များမှပြောင်းလဲသွားတယ်။ တစ်ရက် 60-70 အကြားငါကဒီမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်သော်လည်းငါ့လိင် drive ကိုသူမရဲ့ကာလအပေါ်ကြောင့်သာအဆုံး၌ဦးခေါင်းရတဲ့နေဆဲတက်အဆုံးသတ်အလွန်နိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ flatline ကြောင့်ငါကအတော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဆက်လက်ပေမယ့်ငါအပေါ်ကိုတိုက်ခဲ့သူသိသွားနေခဲ့တယ်။
တစ်နေ့ 97 ပတ်ပတ်လည်ငါ fapped ။ အဘယ်သူမျှမ porn ပါဝင်ပတ်သက်, အဘယ်သူမျှမ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုစသည်တို့ပြီးနောက်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် fap ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ငါ့လိင်စိတ် fuckin ဒုံးပျံကဲ့သို့ပြန်လာယောက်ျားတွေပြောပြပါရစေ! ဒါကိုမယုံနိုင်ဘူး ညစ်ညမ်းမှုလည်းမဟုတ်၊ ငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်၌နေသောမိန်းကလေးများအဘို့ဖြစ်၏
ငါအခုတိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ် - ဟက်တာ! ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်အသက်တာ၌မီးမရှို့သော်လည်းယခုတွင် ပြန်၍ မရနိုင်တော့ပါ။ နေ့ ၁၀၄ ရက်မှာငါနဲ့တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး ED မှာပြissueနာမရှိဘူး။ ငါ့အရင်၊ အသက်ရှင်သောလူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကဲ့သို့ငါပြု၏။
ယောက်ျားတွေနားထောင်ကြတာခက်ခဲတဲ့ရုန်းကန်မှုပဲ။ အဆုံး၌ခံထိုက်သည်။ သငျသညျယောက်ျားတွေမကြာမီအလုံအလောက်ကိုယ်အဘို့အထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Guy 3: အသက်အရွယ် 28, ရှည်လျားသော reboot
သင်စဉ်းစားရမည့်အရာမှာ“ ဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ED ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သို့မဟုတ်ငါအကြောင်းပြချက်မရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်နေခြင်းကြောင့်လား?” ဟုငါတွေးမိသည်။ အဖြေက 'ဟုတ်တယ်' ပြီးတော့ 'ဟုတ်တယ်!' သင်တွေ့ကြုံရမည့်အရာသည်သင်၏လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဘာလဲ၊ နှင့်အမှန်တကယ်လိင်လိင်၏ဖြစ်ခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်“ rewiring” လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသေခြင်းတရားသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသလော ငါလည်းလုပ်ခဲ့တယ် လိင်သည်ဤအရာနှင့်လုံးဝမနီးစပ်ပါ။ ၎င်းသည် reboot နှင့် rewire ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပင်စကားလုံးများကဖော်ပြရန်လို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့်သင် sputter နှင့် backfires အနည်းငယ်ရှိပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသင်အားလုံးဆလင်ဒါအပေါ်ပစ်ခတ်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ rewiring ဖြစ်စဉ်ကိုရှိလိမ့်မည်။ အခုလား။ သုည ED၊ ငါတောင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ တကယ်တော့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ် -“ ငါ့စိုက်ထူမှုကမပြိုလဲဘူး၊ wow၊ မထင်ဘူး၊ ငါလိင်၊ wow၊ ဟုတ်တယ်…အဲဒီမှာရှိနေသေးတယ်။
ငါ့အတွေ့အကြုံကနေငါပြောမယ်၊ ဒါကဒီ Subreddit ၏သဘောသဘာဝနဲ့မကိုက်ညီပေမယ့် porn ကတော့အဓိကပြissueနာပဲ။
NoFap ကိုငါးလအကြာမှာ SO မပါဘဲကျွန်မပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။ ပထမလအနည်းငယ်ဟာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်၊ သင်ဟာအရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်မှုများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁-၂ လကမကောင်းဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မဟာစကားမပြောနိုင်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရမယ့်အစားငါ PMO နဲ့ဝေးကွာနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာအမှတ်မရှိဘူး ၃-၄ လအကြာမှာငါစိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။ ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပိုလို့တောင်သက်သာလာတယ်။ လူငယ်များနှင့်ကျန်းမာသူများသည်ဤအချိန်တွင်လိင်မှုကိစ္စအချို့လိုအပ်သည်။
အဘယ်သို့ငါသေချာနှင့်အတူပြောနိုင်ငါအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ် MO ကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ porn5လအကြာအကြှနျုပျအပျေါခဲ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုခဲ့ ကြီးမားသောငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက်အများကြီးပို။ ကျွန်ုပ်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာလိုခြင်းမရှိသော်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲသူနှင့်တွေ့ကြုံရနိုင်သည့်အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အဲဒါရှိခဲ့တယ် ဘာမြှ "ပုံမှန်" တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏လုပ်ရပ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ MO ကိုအသင့်အတင့်အဆင်ပြေကြောင်းအဘို့ငါထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်ကောင်းလာစေပြီးမကောင်းဘူး၊ ဘာမှမခံစားရဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင် porn တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနောက်တဖန်မသွားချင်တော့ပါ။ ဒါဟာအစသင် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ Fapping မလုပ်ပါဘူး အခုငါလုပ်ချင်တာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာငါ့စိတ်နဲ့ဝေးနေပေမဲ့လည်း NSFW ခွဲတစ်ခုဖွင့်ဖို့ပဲ။
အသစ်အစီအစဉ် asap မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုရှာဖွေထက်နောက်တဖန်အသစ်တခုအပြည့်အဝ 90 ရက်ပေါင်းသံသရာအဘို့အသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Fapping backup တစ်ခု option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကျိန်းသေအစဉ်အမြဲသွားရပေမည်။ (LINK)
Guy6[အသက်အရွယ် 50 ဒါကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်း]:
ငါရက်ပေါင်း ၈၀ မှာမျောနေတယ်၊ ​​၃ ပတ်လောက်နေတယ်။ ငါဒါကိုအကြံမပေးဘူး ဒါပေမယ့်ငါ flatline ထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲထုတ်ရန် 80 ကြိမ် fapped ။
တစ်နေ့ ၁၂၀ လောက်မှာအခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုဟာသေးငယ်တဲ့ dopamine အလျင်အမြန်ဖြစ်ကြောင်း (ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး) …ဒါပေမယ့် fapping သည်အလွန်ကြီးမားသော dopamine အလုအယက် (နှင့်ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်း) ဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရသည်။ ငါ ဖြတ်၍ မရနိုင်သောအရာများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ အရာရာကိုပွတ်နယ်ခြင်း၊ ဂရုတစိုက်လွန်းခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ သူက အပြည့်အဝနေ့ကမှာပြန်လည်ကောင်းမွန် 160။ ဒီနေ့ ၁၄၆ မှာသူပေးတဲ့အကြံဥာဏ်။
ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ ED ရ။
ထိုအခါသင်သည်အဘယ်သူမျှမ FAP လုပ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်၌ Semi's, underwhelming sex နှင့်လုံးဝမအောင်မြင်ပါ။
ထို့နောက်သင်သည်တောကန္တာရ၌လှည့်လည်ပြီး 'ပျောက်ကင်းနိုင်မည်လော' ကိုသိလိုသည်။
ပြီးတော့မင်းရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ဟာမတူကွဲပြားမှု (ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲပေါ့ပါးတဲ့ထိတွေ့မှုတောင်မှ) နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ခဏတာကျောက်ဆောင်စိုက်ထူခြင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုသေဆုံးစေတယ်လို့သင်တွက်ဆလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် PIV သည်ကျောက်တုံးများကိုစိုက်ထူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသာရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဘာမှမလုပ်ပါက၊ ပွတ်ခြင်း၊ ကစားခြင်း၊ ပြတ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊
ပြီးရင်မင်းက PIV ကိုပြန်လုပ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကနောက်ဆုံးတော့အဲဒါကိုတွက်ပြီးပြီ။
ပထမတော့သငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုနှေးကွေးက start မှ (စာသား) ကိုချွတ်ရ (နှင့်သငျသညျလုံးဝ PIV သင်သည်စူပါစိတ်လှုပ်ရှားရရှိသွားတဲ့ဘယ်မှာမှ rewired ကြပြီမဟုတ်။ )
တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သင်ယုံကြည်မှုရဖို့အဖြစ် Tho တစ်နည်းနည်းပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။
မင်းကအားကောင်းနေရင်မင်းဒီလမ်းအတိုင်းဆက်သွားပါ၊ ပြီးတော့ပိုကောင်းလာမယ်။ သင်၌အားနည်းသောအချိန်ရှိလျှင်၊
TL; ဒေါက်တာ: အကြံဥာဏ်လား သင်တန်းဆက်ပါ။ အဆင်ပြေတယ်။ သွေဖည်မသွားပါနှင့် ဘာလို့လဲဆိုတော့ faps တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးတွေတပ်ဆင်ထားလို့ပဲ။ အဲဒီမှာ စြေး သင့်ရဲ့မှားယွင်းစွာကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ထားသောဆားကစ်များကိုဖျက်သိမ်းရန်ငွေပေးချေရန်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သင်တန်းကိုဆက်လုပ်ပါ။ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ Champ လိုမျိုးကစားနေမှာပါ။ ဘယ်လောက်ကြာ? ဘယ်သူမှမသိဘူး။ အသက် ၅၀ အရွယ်၊ ပုံသဏ္outာန်ပျက်ပြီး ၂၅ နှစ် LTR မှာဘယ်လောက်ကျမလဲ။ သုံးပတ်အလွှာ မှလွဲ၍ ... ဒါကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါ 146 ရက်ကမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် Fရက် ၇ ရက်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော NOTHING အကြံဥာဏ်ကိုကျွန်ုပ်လိုက်နာပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် ၃ နှစ်အကြာတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတက် fuck ဆိုတဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကပြန်လမ်းငါ့ကိုသတ်မှတ်။ (BTW, ငါ့နောက်ဆုံး fap (fuckup) သည်လွန်ခဲ့သော ၁၇ ရက်က၊ ၁၀ ရက်လောက်စောင့်ပြီးကြောက်မက်ဘွယ်သောလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ၇ ရက်ထပ်မံစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့သောညတွင်အလွန်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရသည်!) YMMV
၁၇ လ - ယခုထိ
ငါသမိုင်းမှာအရှည်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် ငါ 17 လအကြာစတင်ခဲ့နှင့်ပထမ ဦး ဆုံး5လ PMO မလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကသွားခဲ့တဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၁၀ လလောက်အထိထိုးဖောက်နိုင်လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့စိုက်ထူမှုမရရှိနိုင်ဘူး။ ငါနေဆဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်နှင့်သွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်။
ငါအမှုအရာပိုကောင်း get လျှင်ကြည့်ရှုရန်မ PMO9လအတွင်းသွားပါလို့ပြောလိမ့်မယ်။ ထိုအခါလိင် / rewire သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်တစ်လသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို masturbating start ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ဒါ့အပြင်ကျွန်မမှာလိင်အင်္ဂါချို့တဲ့နေတုန်းပဲရှိသေးပေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာ ၄ ကြိမ်ရှိခဲ့ရင်သူမအတွက်အပြည့်အ ၀ ရုန်းကန်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကိုပဲစဉ်းစားနေရုံပါပဲ။ အရာကတော့ငါဟာသူမထဲကိုတောင်မ ၀ င်ဘူး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအရမ်းကွဲပြားနေလို့သူဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်သာကြည့်ရတာ။ ဆိုလိုတာက၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြန်ကောင်းလာပြီဆိုရင်၊
ငါကအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်အဘို့ဤ reboot လုပ်နေဆက်လက်သွားလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြhaveနာတစ်ခုရှိလျှင်သို့မဟုတ်စိုက်ထူမရနိုင်ပါကဆေးထိုးခြင်းနှင့် implants များကဲ့သို့သောအခြားအဖြေများရှိသည်။
1 ။ ငါ့ကိုနှေးကွေးခဲ့သည်တူသောငါခံစားခဲ့ရသောကွောငျ့အကြှနျုပျအဘို့, စိတ်ကူးယဉ်ဈထွက်ခုတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အရာတစျခုဖွစျသညျ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်ဖယ်ရှားပစ်ပြီးတာနဲ့ငါသည်ငါ့ဒစ်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အမှုအရာမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်သတိပြုမိသည်။ ဒီလမ်းကပြန်သွားကြသည်မဟုတ်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / လွန်းအများကြီးလျော့နည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် edging စေမည်။
2. ဘဝအပြောင်းအလဲများကိုဦးဆောင် self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတချို့ယောက်ျားတွေများအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးပြင်းလာကြောင်း (ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်ကြီးပြင်း။ သိမည်မဟုတ်ပါ) မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဤကြီးပြင်းလာမှုသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်အထူးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီးအထူးသဖြင့်ကုသရန်လိုအပ်သည်။ ငါအရင်ဘလော့ပို့စ်များအတွက်အကြောင်းပြောဆို။ ယခုငါသိပြီ, ငါလိုအပ်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးယန္တရားများစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လို၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ ငါ porn ကိုစိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာပါပဲ။
ငါ porn ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်စုံတွဲတွေ့ခဲ့ရသည်, ငါနောက်ဆုံးတော့ "ဒီငါလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါလိုချင်တာကတစ်ယောက်ယောက်ကိုကိုင်ထားတာပဲ။ ” ဒါကမှန်တယ် - ညစ်ညမ်းတဲ့အတွေးကကျွန်မကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဘ ၀ ထဲ ၀ င်ချင်လာတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝဘာမှမပါ။ ငါကပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ porn ကိုရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါဝန်ခံလိမ့်မယ်၊ ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာရှာဖွေခြင်းကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတစ်နေ့တာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ porn အစဉ်အဆက်ကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုမှပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အထူးအရေးယူမတိုင်မီဤကဲ့သို့သောအဘယ်အရာကိုမျှငါ့ထံသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ယူဖို့၊ အတည်ပြုဖို့အလုပ်မှာကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတာပါ၊ ငါဟာစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေချိန်မှာညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ ငါသွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအကန့်အသတ်တစ်ခုထဲကိုသွားပြီးပြောမယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုရဲ့အမှတ်အသားလို့ထင်တယ်။
မှတ်သားရန်လိုသည်မှာကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကကျွန်ုပ်လျစ်လျူရှုရန်အခြေအနေရှိသောအလိုဆန္ဒများနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုစတင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောဆန္ဒတစ်ခုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ပြီးအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်သည်အလွန်အားတက်ဖွယ်ရလဒ်များဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး၊ ၎င်းသည်မပြေလည်သော်လည်းအနည်းဆုံး ၀ င်ငွေအနည်းဆုံးရရှိရန်ထောက်ပံ့သင့်သည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဤမျှလောက်ရဲရင့်သောအရာကိုကျွန်ုပ်မကြိုးစားခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးကိုယ့်နှလုံးသားကိုနားထောင်နေသလိုပဲ။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်ပါကအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးပြီးပြီ - EV အရာအားလုံး - ဝက်ဘ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ အအေးခန်းများ၊ အင်တာနက်မရှိသောခရီးဝေးစခန်းများ၊ သူငယ်ချင်းများကိုရင်ဖွင့်ခြင်း၊ အနီရောင် X၊ ရော်ဘာတီးဝိုင်းသည်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် - နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းမည်သည့်အရာကမျှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက်သင့်အားလေးလံသောကိုယ်ကျိုးရှာမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ မင်းဘ ၀ မှာဘာမှားနေတာလဲ၊ မင်းဘာကြောင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတာကိုစိတ်မ ၀ င်စားတာလဲ၊ တစ်ခုခုတိုးတက်လာသည်အထိသင်၏မြည်းကိုချွတ်။ သင်၏အခြေအနေကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ပါ။ တဖန်ပြန်လျှော်ပါ။
၃။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်သောကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဖြည့်စွက်မှုများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာသင်၏အထီးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကုန်လွန်သွားခြင်းတို့ကြောင့်ဆံပင်ပေါင်းပင်၊ ပေါက်စကူကာမောက်စ်၊ yohimbe စသည့်“ အထီးမြှင့်တင်ခြင်း” ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်လုံးဝအသုံးမကျဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ထပ်တိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေနေသည့်ပုံမှန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေမဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများအားငြင်းခုံဆွေးနွေးပါမည်။
အဆိုပါဖြည့်စွက်ဖို့ချွင်းချက်ရဲတဦးကိုအချည်းနှီးဆောင်ပုဒ်များမှာဂါဘမြို့သားများနှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါမိုင်နိုအက်စစ်ယူပြီးစတင် (က vasodilator နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဖို့ရှေ့ပြေးဖြစ်သော) 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ် (နံနက်, မွန်းတည်နှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်အိပ်ရာမဝင်မီ) နှင့်ဂါဘမြို့သား 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ်နှင့်ရက်အတွင်းတစ်အံ့သြစရာခြားနားချက်သတိပြုမိသည်။ ဂါဘမြို့သားကအနည်းဆုံးအကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့သလိုပဲဦးနှောက်နှင့်ငါ့အဘို့ inhibitor အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
လူအများကပါးစပ်ဖြင့် GABA သည်သွေးကြောကို ဖြတ်၍ မရနိုင်သော်လည်းအချို့ကမူ ၃၀၀၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဆေးများကိုနေ့စဉ်သောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အချို့ကမူသူသည် pituitary gland မှတစ်ဆင့် ဦး နှောက်၏နောက်ကျောတံခါးကိုတွေ့ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိဖို့ဟန်ဆောင်မပြခဲ့ပေမဲ့ငါ့အတွက်တော့ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော့်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်စေပြီးဗဟိုပြုခဲ့တယ်။ အိပ်စက်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်၊ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့တစ်နေ့တာမှာအလိုအလျောက် Semrecrections စတင်ခဲ့တယ်။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးမျိုးသောဖြည့်စွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းပွင့်လင်းသောစိတ်နှင့်သူတို့ကိုယူပေမယ့်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ။ ထိုအခါငါသည်မည်သည့်လူသားဖြစ်သကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ကျွန်တော့်အတွက် GABA နဲ့ Arginine အတူတကွအားကောင်းတဲ့ဆေးတစ်ခုပါ။ ဒါကသူတို့တစ်တွေ reboot အဘို့အဘယ်သူမျှမကဆိုပါတယ်! ငါထင်တာကတော့သင်တို့ထဲကအချို့သော LONG rebooters တွေအတွက်ကတော့သူတို့ဟာရိုက်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့်ငါလိုမင်းမျိုးတွေကိုစွဲလမ်းမှုတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရရင်၊
ကျွန်ုပ်၏ယခင်စာရင်းများကိုပေါင်းခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှုမရှိသော်လည်းလိင်အင်္ဂါမှတစ်ပါးအခြားတစ် ဦး အနေဖြင့်အပျိုစင်ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကျွန်ုပ်၌ ED ရောဂါစွဲကပ်နေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ငါနှင့်အတူလိုက်ပါလာပြီး၊ ကိုယ့်ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ပြီးသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာ ED ပြင်းထန်တဲ့ ED ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များ - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အပြည့်အ ၀ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကို ED အားထာဝရပျောက်ကွယ်သွားခြင်း။
- ကာလတိုရည်မှန်းချက်များ - ပုံမှန်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအားပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်း။ နံနက်သစ်သားနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း ၁၀၀% မြဲမြံစွာပြန်လည်ရရှိသည်။ (ငါဤအရာကိုပြန်လည်ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ငါလိင်ဆက်ဆံရန်နှင့်အောင်မြင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ )
ဒါကြောင့်ငါ porn ကိုပြproblemနာမရှိအလွန်ကောင်းစွာရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရန်မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူး, ထို့နောက် 103 နေ့ကအမှတ်အသား / 3m2w4days, ငါ porn အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစမ်းသပ်ပြီးငါနောက်မှခံစားခဲ့ရ! အဘယ်သူမျှမဖြစ်စေစိတ်ကူးယဉ်ရုံထိတွေ့အာရုံစိုက်။ O ကိုကြာကြာယူခဲ့ပြီးအတော်များများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငါ O အကြောင်းအကြိမ်အနည်းငယ်ရောက်သောအခါ၊ - ဤစမ်းသပ်မှု၏အကြောင်းရင်းမှာငါသည်ယခင်သီတင်းပတ်တလျှောက်လုံးတစ်ပိုင်းတစ်စအလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနံနက်ယံ၌ညအချိန်တွင်တခါတရံသစ်သားထည်နှင့်နိုးထလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုငါထင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကရိုက်ချက်တစ်ခုပေးလိုက်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခဲ့သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့နောက်၊ နောက်အပတ်မှာကျွန်တော့် lil fella ဟာသက်ရှိတွေ၊
တစ်ပါတ်အကြာတွင်ငါထပ်မံကြိုးစား, နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ဒီအချိန်ပြီးနောက်, ငါတကယ်မှာအကြီးမခံစားရဘူး?! လုံးဝထိုရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်လုံးအဘယ်သူမျှမသွက်လှုပ်ရှားမှု။ အတော်လေးထူးဆန်း။ ဒါကြောင့်ငါဖန်တီးခဲ့တဲ့ 'ရပ်တန့်' နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက် ၂ ပတ်ကြာအောင်ထားခဲ့ပြီး Ive ကိုတစ်ပတ်အကြာမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်နှစ်ခုမက်ခဲ့တယ်။ ငါနိုးသောအခါအတော်လေးအထင်ကြီးစရာစိုက်ထူမှုများရှိခဲ့သည်။ ညတော်တော်ကြာတဲ့ညတော့ဒုတိယကတော်တော်မြန်သွားတယ်။
အဲဒီကနေငါ rewire ကိုကူညီမတိုင်မီကနေဒီမိန်းကလေးနှင့်အကြိမ်အနည်းငယ်ထွက်သွား။ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကျပန်းနေ့ခင်းဘက်မှာငါလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး။ အဆုံးမှာတော့သူမကိုနမ်းတဲ့အခါငါ့ကောင်လေးကချက်ချင်းပဲအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်။ အပြည့်တော့ ၁၀၀% တော့မဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒီမှာသူမကိုကြာကြာနမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ ၆၀ / ၇၀% ဖြစ်မယ်လို့ငါပြောမယ်။
ဒီမနက်ခင်းမှာငါဟာအလင်းရောင်နည်းနည်းလေးနဲ့စုံတွဲတစ်တွဲကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကိုင်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်ယခင်ကမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ၊ အမြန်မြင့်တက်လာခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်လေဖြတ်ခြင်းများမှအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှုများ ??
ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အခြားသူများအတွက် - ရေရှည်စာအုပ်များ -
အဘယ်အရာကို (YBOP site ပေါ်တွင်အခြားအ entries တွေကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်ဤ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ): တစ်ရှည်လျားသော reboot (4 လအတွင်း) ရှိခြင်းနှင့်သုံးစွဲ / + မနက်စိုက်ထူမြင်နေမဟုတ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာအမှုတစ်ခုစိုက်ထူရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် re-sensitize ဖို့အာရုံခံစားဘဲ, အရေချိုးခန်းထဲ၌နောက်တဖန်မတစ်ဦးထက်တစ်မိနစ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကသူ့လိင်တံ stroking ပေါ့ပေါ့စတင် မိမိအလိင်တံ / ပုံမှန်ထိတွေ့ရန်သူ၏ဦးနှောက် rewire ။ ဒီနည်းကို ME အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သွက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ရက်သတ္တပတ်ကဤအလင်းပြန်လည်-sensitive technique ကို၏လက်မတိုင်မီတစ်ပါတ်မှသို့မဟုတ်ဤဤမျှကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုအလွန်အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် နေ. ငါ့ကိုကုမ္ပဏီကြီးခုန်ပျံကျော်လွှားတိုးတက်ရေးရအောင်အကူအညီပေး, ငါသည် porn အခမဲ့စမ်းသပ်ခြင်း SESSION ကြိုးစားခဲ့, ဘာကြောင့်လဲတဲ့ IM စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤအဆင့်ကို AT REWIRING သို့ကြည့်မျှော်အဘယ်ကြောင့်သင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အိုင်တီဖတ်ရှုပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ kegels ကိုစတင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒီဆောင်းပါးရဲ့ kegel အပိုင်းမှာတော့ယောက်ျားတော်တော်များများဟာပုံမှန် erectile function ကိုပြန်မရသူတွေထက်အများကြီးပိုမြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တယ်။ ငါတကယ်စဉ်းစား, ဒီအဆင့်မှာ, ဒီငါ 100% ငါကြိုးစားအားထုတ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုစိုက်ထူ၌ရပ်နေရကူညီပေးပါမည်။ ငါဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြမယ်။
ကောင်းသောလူအပေါင်းတို့အားကံနှင့် rewire နှင့် re-sensitize မှ bonafide အလုပ်လုပ်နည်းစနစ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နံနက် / spont စိုက်ထူပြန်ရအကူအညီပေးခဲ့မှတ်ချက်ပေးရန်ပေးပါ။
တစ်ဦး 50 နှစ်အရွယ်ထံမှအကြံဉာဏ်များ